04 « January « 2017 « Dr Myo Thida
Image Posted on January 4, 2017 Updated on February 22, 2017
This entry was posted in General Thoughts.
၁) စင်ျကာပူ၏ မွဈဖြားခံရာ
စင်ျကာပူ နိုငျငံလို့ ဖွဈပျေါလာမဲ့ ဒီကြှနျးစုလေးတှမှော လူတှစေတငျနထေိုငျတယျလို့ ယူဆရတာကတော့ ဒုတိယ ရာစုနှဈ အစမှာ ဖွဈပါတယျ။ စုမာထွားကြှနျးစုတှေ(ယခု အငျဒိုနီးရှား)တို့ရဲ့ ဘုရငျ့ မငျးနပွေညျတျော အတှကျ ဆိပျကမျးမွို့ငယျလေးအဖွဈ တညျရှိခဲ့ပွီး ထိုစဉျက တီမားဆကျ(Temasak)၊ ပငျလယျမွို့လို့ ချေါတှငျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၄ရာစု နှောငျးပိုငျးကာလမှာတော့ မာလကာနိုငျငံ (Sultanate of Malacca) အငျအားကွီးမားလာပွီး အနီးပတျဝနျးကငျြမှာ ကြှနျးစုတျောတျောမြားကို နယျခြဲ့ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အငျပါယာရဲ့ မငျးနပွေညျတျောကို မာလာကာမွို့လို့ အခွေံခံထားပွီး မွောကျဖကျမှာတော့ အယုဒ်ဗယ မွို့တျော (ယခု ထိုငျးနိုငျငံ) နဲ့ အနောကျတောငျမှာတော့ ဆုမာထွာအထိ နယျမွခြေဲ့ထှငျနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ ၁၅၁၁ ခုနှဈမှာတော့ ပျေါတူဂီတှဟော အမှေးအကွိုငျ ကုနျသှယျမှု လုပျငနျးတှေ ကို လကျဝါးကွီး အုပျနိုငျဖို့ မာလကာနိုငျငံကို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ကွပါတယျ။ ပျေါတူဂီတှကေို စဈရှုံးသှားခဲ့တဲ့ မာလကာ ဘုရငျဟာ မာလကာ မွို့တျောကို စှနျ့ခှာ ထှကျပွေးခဲ့ရပါတယျ။ မာလကာ ဘုရငျဟာ ဘငျတနျကို ခွကေုပျယူကာ မွို့တျော အဖွဈသတျမှတျပွီး ပျေါတူဂီတှကေို ပွနျတိုကျထုတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ ၁၅၂၆ မှာတော့ ပျေါတူဂီတှဟော ဘငျတနျကို သိမျးပိုကျပွီး မာလကာ ဘုရငျကို အပွီးသတျ ခမြှေုနျးလိုကျနိုငျပါတယျ။ ၁၅၂၈ မှာတော့ မာလကာ ဘုရငျရဲ့ သားတျော ၂ ပါးအနကျ အငယျ မငျးသား Alauddin Riayat Shah II က ဂြိုဟောနဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ကြှနျးစုတှေ (စင်ျကာပူဖွဈလာမညျ့ ကြှနျးစုမြား အပါအဝငျ) ကို အခွစေိုကျပွီး ဂြိုဟော အငျပါယာကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ဂြိုဟောဟာ ပျေါတူဂီတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှု၊ စုမာထွားတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုကွားမှာပဲ တဖွေးဖွေး အငျအားကွီးမားလာခဲ့ပါတယျ။ ဂြိုဟော ဘုရငျဟာ ပျေါတူဂီတှကေို တိုကျထုတျနိုငျဖို့ တခြိနျလုံး ကွိုးစားနခေဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ စုမာထွားမွောကျပိုငျးမှာ ရှိတဲ့ Ache လူမြိုး (မူဆလငျ) တှကေ မာလကာ ရလေကျကွားကို လှမျးမိုးလာကွပါတယျ။ မူဆလငျ ကုနျသယျတှဟော ပျေါတူဂီ (ခရဈယနျ)တှေ လှမျးမိုးတဲ့ မာလကာ အစား မူဆလငျမွို့ဖွဈတဲ့ Ache ကို ဦးစားပေး ကုနျသှယျလာကွပါတယျ။ ပျေါတူဂီတှေ (မာလကာ) နဲ့ ဂြိုဟော ကွား အပွနျအလှနျ စဈဖွဈနခြေိနျမှာ Ache ဟာ တဖွေးဖွေး တိုးတကျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလို Ache ရဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုကို ခံလာရတဲ့ ပျေါတူဂီတှနေဲ့ ဂြိုဟောဟာ ယာယီ စဈပွငွေိမျးမှု စာခြုပျခြုပျဆိုပွီး Ache ကို ဖိနှိမျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွပါတယျ။Ache တှကေို နှိမျနငျးပွီးနောကျ ပျေါတူဂီတှနေဲ့ ဂြိုဟောဟာ စဈဖွဈကွပွနျ ပါတယျ။
၁ရ ရာစု အစောပိုငျးကာလမှာတော့ ဒတျချြလူမြိုးတှကေ အရှတေ့ောငျ အာရှ ကုနျသှယျမှုထဲကို စီးဝငျလာ ကွပါတယျ။ ပျေါတူဂီတှရေဲ့ စီးပှားရေး လကျဝါးကွီး အုပျစိုးမှုကို မခံနိုငျတဲ့ ဒတျချြလူမြိုးတှဟော ဂြိုဟောနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ပျေါတူဂီတှကေို တိုကျထုတျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၆၄၂ မှာ ဒတျချြနဲ့ ဂြိုဟော တို့ဟာ ပျေါတူဂီတို့ကို မာလကာ မွပေျေါက မောငျးထုတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၆၀၆ မှာ ဒတျချြနဲ့ ဂြိုဟောတို့ ခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျအရ ဒတျချြ လူမြိုးတှကေ ဂြိုဟောကို စဈမကွငွောဖို့ သဘောတူညီခကျြနဲ့ မာလကာ ဒသေကို အုပျစိုးခဲ့ပါတယျ။ ဒတျချြတှဟော မာလကာ ရလေကျကွားအစား ဆနျဒါ ရလေကျကွား (straits of sunda) ကို စတငျ အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ စင်ျကာပူ ဖွဈလာမဲ့ ကြှနျးစုလေးတှဟောလဲ ငါးဖမျးသမားတှေ နထေိုငျရာ ကြေးရှာလေး အဖွဈသာ တညျရှိနခေဲ့ပါတယျ။ လူဦးရေ ၁၀၀၀ လောကျသာ ရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးနိုငျပွီး အမြားစုက မလေးလူမြိုးတှဖွေဈပွီး တရုတျလူမြိုး အနဲငယျလဲ နထေိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၇ ရာစု နှောငျးပိုငျးမှာတော့ ပွငျသဈလူမြိုးတှဟော ဒတျချြ နိုငျငံကို ဝငျရောကျသိမျးပိုကျခဲ့ကွပါတယျ။ အကြိုးဆကျအဖွဈ ဒတျခပျြတို့ရဲ့ ကိုလိုနီ နိုငျငံဖွဈတဲ့ မာလကာ (ဂြာဗား) ဒသေကိုလဲ ပွငျသဈတို့ သိမျးပိုကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒတျချြတှကေ စဈမဟာမိတျဖွဈတဲ့ ဗွိတိသြှ (အင်ျဂလိပျ)တို့ကို သူတို့ရဲ့ ကိုလိုနီ နိုငျငံငယျတှကေို ကာကှယျပေးဖို့ အကူအညီတောငျးခဲ့ပါတယျ။ ဗွိတိသြှ လူမြိုးတှဟော အရှတေ့ောငျအာရှ နိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ ပွငျသဈလူမြိုးတှကေို တိုကျထုတျပွီးနောကျ ကိုလိုနီနိုငျငံတှကေို ဒတျချြကို ပွနျလှဲပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗွိတိသြှ အရာရှိငယျနဲ့ ကုနျသညျကွီးတှဟော ဒတျချြတို့ရဲ့ စီးပှားရေး လကျဝါးကွီးအုပျမှုကို မကြေ မနပျဖွဈလာခဲ့ကွပါတယျ။
၂) ရှရေောငျနရေ့ကျမြား၏ အစ
၁၈၁၉ မှာ Thomas Stamford Raffles ဟာ အရှအေိ့န်ဒိယ ကုမ်ပဏီရဲ့ ကိုယျစားလှယျ အဖွဈ ရောကျရှိလာပွီးနောကျ ဂြိုဟော ဘုရငျပိုငျ စင်ျကာပူ တောငျပိုငျး ကြှနျးစုတှကေို ဗွိတိသြှရဲ့ ကုနျသှယျမှု အခွစေိုကျ စခနျး အဖွဈ အသုံးပွုဖို့ ဂြိုဟော ဘုရငျနဲ့ သဘောတူ စာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ Raffles ရဲ့ အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ ပျေါလစီကွောငျ့ ကုနျသညျကွီးမြားဟာ စင်ျကာပူကို အလုံးအရငျးနဲ့ ဝငျရောကျလာကွ ပါတယျ။ ဒါကို မကနြေပျတဲ့ ဒတျချြလူမြိုးတှကေ Raffles ရဲ့ အထကျလူကွီးမြားကို တငျပွပွီး Raffles ကို စင်ျကာပူကနေ ဖယျရှားပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗွိတိသြှကုနျသညျမြားက စင်ျကာပူကို ဆကျလကျ ထိနျးသိမျးထားဖို့ ပါလီမာနျမှာ အောငျမွငျစှာ အဆိုပွု တငျသှငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၈၂၄ ခုနှဈမှာ ဗွိတိသြှနဲ့ ဒတျချြ (နယျသာလနျ) အကွား သဘောတူညီမှု ရယူပွီး မာလကာ၊ ပီနနျးနဲ့ စင်ျကာပူ ကြှနျးစု အားလုံးကို အရှအေိ့န်ဒိယ ကုမ်ပဏီက လှဲပွောငျးရယူခဲ့ပါတယျ။ ဒီဒသေတှကေို ဗွိတိသြှပိုငျ နယျမွမြေား (Straits Settlements) အဖွဈ သတျမှတျပွီး ပီနနျးကို မွို့တျောအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၈၃၂ မှာတော့ မွို့တျောကို စင်ျကာပူအဖွဈ ပွောငျးလဲ သတျမှတျ ခဲ့ကွပါတယျ။ အရှအေိ့န်ဒိယ ကုမ်ပဏီရဲ့ အုပျခြုပျမှု ကို မနှဈသကျတဲ့ (Straits Settlements အတှငျး နထေိုငျသူ) ယူရိုပီယံ နိုငျငံသား တှဟော ဗွိတိသြှ ပါလီမာနျမှာ တိုကျရိုကျ အုပျခြုပျမှုကို တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၈၆၇ မှာ ဗွိတိသြှပိုငျ နယျမွမြေား (Straits Settlements) ဟာ ဗွိတိသြှရဲ့ တိုကျရိုကျ အုပျခြုပျမှုအောကျကို ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီကာလမှာ အင်ျဂလိပျလူမြိုးမြားဟာ မလေး ပွညျနယျ၊ ကြှနျးစု အမြားစုကို သိမျးပိုကျ လှမျးမိုးခဲ့ပါတယျ။ ဗွိတိသြှ အစိုးရဟာ ၁၈၉၅ ခုနှဈမှာ မလေးကြှနျး (malay peninsulas) ပျေါရှိ ပွညျနယျ လေးခုကို ပေါငျး စညျးပွီး ဖယျဒရယျမူဖွငျ့ အုပျခြုပျသော မလေးပွညျနယျမြား၊ Federated Malay States (FMS) လို့ ချေါဆိုခဲ့ပါတယျ။ ကှာလာလမျပူ ကို FMS ရဲ့မွို့တျောအဖွဈ သတျမှတျခဲ့ပွီး အုပျခြုပျရေး၊ စဈရေးနှငျ့ သံတမာနျရေးရာတို့တှငျ ဗဟိုအစိုးရ (အင်ျဂလိပျ အစိုးရ)က တိုကျရိုကျခြုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ပွညျနယျဆိုငျရာ အုပျခြုပျရေး အရာရှိမြားအနဖွေငျ့ အဈစလာမျဘာသာဆိုငျရာနှငျ့ ပွညျတှငျး အရေးအခငျးမြားကိုသာ ဆုံးဖွတျခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါသညျ။ မလေးကြှနျးစုပျေါရှိ အခွား ပွညျနယျ ၅ ခုကိုတော့ ဖယျဒရယျမူဖွငျ့ မအုပျခြုပျ သော မလေးပွညျနယျမြား၊ UnFederated Malay States လို့ ချေါဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီပွညျနယျမြားဟာ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျရေး၊ ကိုယျပိုငျ ဘုရငျစနဈနဲ့ အုပျခြုပျခဲ့ကွပါတယျ။ Federated Malay States၊ UnFederated Malay States၊နှငျ့ Straits Settlements ပေါငျး ၃ ခုကို မလယာ ဒသေလို့ အမညျတှငျခဲ့ပါတယျ။ မလယာ ဒသေဟာ ဗွိတိသြှ အစိုးရရဲ့ အုပျခြုပျမှုအောကျမှာ တငျး၊ ရာဘာ စတဲ့ လုပျငနျးတှနေဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ လာခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈကာလမှာတော့ ဂပြနျတှဟော မာလယာကို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျလာကွပါတယျ။ ၁၉၄၂ ဖဖေျောဝါရီ ၁၅ ရကျမှာ ဂပြနျကို စဈရှုံးသှားတဲ့ အင်ျဂလိပျတှဟော မာလယာကို စှနျ့လှတျခဲ့ရပါတယျ။ ဂပြနျတှေ ဟာ မာလယာဒသေကို ၃ နှဈတာ အုပျစိုးပွီးနောကျ ၁၉၄၅ မှာတော့ အင်ျဂလိပျတှကေ မလယာ ဒသေကို ပွနျလညျ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၄၆ ခုနှဈမှာတော့ Federated Malay States၊ UnFederated Malay States အတှငျးရှိ ပွညျနယျ ၉ ခု နှငျ့ အတူ Straits Settlements အတှငျးရှိ ပွညျနယျ ၂ ခု (ပီနနျးနှငျ့ မလကာ) တို့ကို တစုတညျး ပေါငျးစညျးပွီး ဗွိတိသြှ အစိုးရ၏နိုငျငံ အဖွဈ မလယာ ပွညျထောငျစု ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ကွပါ တယျ။ မလေး လူမြိုးမြားရဲ့ ဆန်ဒပွ ကနျ့ကှကျမှုမြားကွောငျ့ ၁၉၄၈ ခုနှဈမှာတော့ မလယာ ပွညျထောငျစု ကို မလယာ ဖယျဒရယျ ပွညျထောငျစု (ပီနနျးနှငျ့ မလကာမှအပ ကနျြမလေးပွညျနယျမြား အနနေဲ့ ပွညျတှငျး အရေးအခငျးမြားတှငျ ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခှငျ့ ရရှိသော) အဖွဈ ပွောငျးလဲ ဖှဲ့စညျးနိုငျခဲ့ ပါတယျ။အဲဒီကာလ မှာ စင်ျကာပူဟာ ဗွိတိသြှအစိုးရ၏ လကျအောကျခံ ကိုလိုနီ နိုငျငံအဖွဈ ကနျြရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။
၁၉၅၇ သွဂုတျလ ၃၁ ရကျနမှေ့ာတော့ ဗွိတိသြှ အစိုးရက မလယာ ဖယျဒရယျ ပွညျထောငျစု Commonwealth အဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံအဖွဈ သတျမှတျပွီး ကိုယျပိုငျ လှတျလပျခှငျ့ ပေးခဲ့ပါတယျ။
၁၉၆၃ ခုနှဈ မှာတော့Straits Settlements အတှငျးရှိ စင်ျကာပူ အပါအဝငျ အခွားပွညျနယျမြားဟာ မလယာ ဖယျဒရယျ ပွညျထောငျစုနှငျ့ ပေါငျးစညျးပွီး ယနေ့ မလေးရှားနိုငျငံကို တညျထောငျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၆၅ ခုနှဈမှာတော့ စင်ျကာပူနိုငျငံဟာ မလေးရှားက ခှဲထှကျပွီး သီးသနျ့နိုငျငံ အဖွဈ ရပျတညျခဲ့ရပါတယျ။
၃) စင်ျကာပူ ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ
၁၉၄၅ ခုနှဈနောကျပိုငျး (ဒုတိယကမ်ဘာစဈ အပွီး) စင်ျကာပူဟာ အင်ျဂလိပျအစိုးရရဲ့ ကိုလိုနီ နိုငျငံ အဖွဈ ရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ တိုငျးပွညျရဲ့ လြှပျစဈစနဈနှငျ့ ရပေေးဝရေေး စနဈအပါအဝငျ စနဈတျောတျောမြားမြား ဟာ စဈကာလအတှငျး ဖကျြဆီးခွငျး ခံခဲ့ကွရပါတယျ။ စဈကွီးရဲ့ စဈပွီးကာလ အကြိုးဆကျအဖွဈ အစာ ရစော ရှားပါးခွငျး၊ ရောဂါ ထူပှားခွငျးတို့ကို စင်ျကာပူ နိုငျငံသားတှေ ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ အခုလို စဈတှငျး ကာလနဲ့ စဈပွီးကာလရဲ့ ဆိုးကြိုးကို ခံစားလာရတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံသားတှဟော အင်ျဂလိပျအစိုးရရဲ့ အုပျခြုပျမှု အပျေါ သံသယ ဝငျလာကွပါတယျ။ ကိုယျပိုငျ လှတျလပျရေးကို လိုလားတဲ့ နိုငျငံသားတှရေဲ့ ဆန်ဒပွမှုတှေ လဲ မကွာခဏ ဖွဈပျေါလာကွပါတယျ။
ဗွိတိသြှ အစိုးရ အနနေဲ့ကလဲ စင်ျကာပူ နဲ့ မလယာ ဒသေတှကေို လှတျလပျခှငျ့ပေးရတော့မယျဆိုတာကို ကွိုမွငျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၄၆ ခုနှဈမှာ Straits Settlements ကို ဖွိုခှဲပွီး Straits Settlements အတှငျး ပွညျနယျ ၂ ခုနဲ့ မလေး ပွညျနယျမြားကို ပေါငျးစညျးပွီး မလယာ ပွညျထောငျစုကို ဖှဲ့စညျးပေးခဲ့ပါတယျ။ (စင်ျကာပူ မှတျစု-၁ စာပိုဒျ ၂ ကို ကိုးကားရနျ)။
စင်ျကာပူနိုငျငံကို အင်ျဂလိပျအစိုးရရဲ့ ကိုလိုနီ နိုငျငံ အဖွဈ ဆကျလကျထားရှိခဲ့ပမေဲ့ (အင်ျဂလိပျ အစိုးရက ရှေးခယျြ ခနျ့အပျသော) အုပျခြုပျရေးမှူးတယောကျ ထားရှိပွီး နိုငျငံတှငျး ပွသာနာမြားကို ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခှငျ့ ပေးခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလမှာတော့ သီးသနျ့ အုပျခြုပျရေး အဖှဲ့ နှငျ့ ဥပဒေ အကွံပေး အဖှဲ့တို့ကို ဖှဲ့စညျးပွီးနောကျ ဥပဒေ အကွံပေး အဖှဲ့အတှကျ အမတျမြားကို ပွညျသူမြားက ရှေးခယျြ တငျမွှောကျနိုငျသညျဟု ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ဥပဒေ အကွံပေး အဖှဲ့အတှကျ ရှေးကောကျပှဲကို ၁၉၄၈ ခုနှဈ မတျလ ၂၄ ရကျမှာ ကငျြးပ ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဥပဒေ အကွံပေး အဖှဲ့မှာ အမတျ ၂၂ ဦးပါရှိပွီး ၁၃ နရောကို ဗွိတိသြှအစိုးရက ရှေးခယျြ ခနျ့အပျပွီး၊ ၃ နရောကိုတော့ စီးပှားရေး ဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျး ၃ ခုက ကိုယျစားလှယျမြားကို ပေးအပျခဲ့ပါတယျ။
ကနျြ ၆ နရောကိုသာ အမတျလောငျးမြားက ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျနိုငျပွီး ပွညျသူမြားက မဲပေး ရှေးခယျြခဲ့ကွ ပါတယျ။ ၃ နရောကို စင်ျကာပူ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (singapore Progressive Party) က ရရှိခဲ့ပွီး ကနျြ ၃ နရောကို သီးသနျ့ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသူ အမတျမြားက ရရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီရှေးကောကျပှဲကို ပွညျသူ အမြားစုက မနှဈသကျခဲ့ကွပါဘူး။ မဲပေးနိုငျခှငျ့ ရှိသူ လူဦးရရေဲ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးကသာ ဝငျရောကျ မဲပေးခဲ့ ကွပါတယျ။
၁၉၅၁ ခုနှဈမှာတော့ ဥပဒေ အကွံပေး အဖှဲ့အတှကျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ရှေးကောကျပှဲကိုကငျြးပပေးခဲ့ ပါတယျ။ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အမတျနရော ၉ နရောထိ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ စင်ျကာပူ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (singapore Progressive Party)က ၆ နရော အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ ဒီရှေးကောကျပှဲ ကွောငျ့ စင်ျကာပူနိုငျငံသားတှဟော အုပျခြုပျရေးပိုငျးမှာ ပွောရေးဆိုခှငျ့ အနညျးငယျ ရရှိလာပမေဲ့ အင်ျဂလိပျ အုပျခြုပျမှုက အားသာနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ မလယာ ပွညျနယျ အတှငျးရှိ ကှနျမွူနဈတှရေဲ့ ထကွှပုနျကနျမှုကလဲ အားကောငျးလာပါတယျ။ အင်ျဂလိပျအစိုးရဟာ ကှနျမွူနဈတှကေို အပွငျးအထနျ နှိမျနငျးပွီးနောကျ စင်ျကာပူနိုငျငံကို အကနျ့အသတျမြားနဲ့ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ ပေးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါ တယျ။
၁၉၅၅ မှာ ဥပဒအေကွံပေးအဖှဲ့ အသဈကို ပွောငျးလဲ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအဖှဲ့မှာ အမတျ ၃၂ ဦး ပါရှိမှာ ဖွဈပွီး ၂၅ နရောကို ပွညျသူမြားက ရှေးခယျြတငျမွှောကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အနိုငျရပါတီရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ကို တိုငျးပွညျအုပျခြုပျဖို့ ရှေးခယျြမှာ ဖွဈပွီး အဖှဲ့ဝငျ အမတျမြားကို ပါလီမာနျစနဈနဲ့ ရှေးခယျြပွီး အုပျခြုပျရေး အဖှဲ့ (cabinet) အဖွဈ ခနျ့အပျခှငျ့ ပေးခဲ့ပါတယျ။ အင်ျဂလိပျအစိုးရအနနေဲ့ လုံခွုံရေးနဲ့ သံတမာနျရေးရာမြားကိုဆဲ ထိနျးခြုပျထားဆဲဆိုပမေဲ့ ၁၉၅၅ မှာ ကငျြးပတဲ့ ဒီရှေးကောကျပှဲဟာ ယခငျရှေးကောကျပှဲတှနေဲ့ စာရငျ တရားမြှတတယျလို့ အမြားက လကျခံလာခဲ့ကွပါတယျ။ စင်ျကာပူ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (singapore Progressive Party)က ၄ နရောသာ အနိုငျရခဲ့ပွီး၊ အလုပျသမား ပါတီ (Labour Front) က ၁၀ နရော အနိုငျရခဲ့ကာ၊ မလေးရှား တရုတျအဖှဲ့ UMNO-MCA က ၃ နရော အသီးသီး အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ အသဈ ပါတီ တခုဖွဈတဲ့ People’s Action Party (PAP) က ၃ နရော အနိုငျရ ရှိခဲ့ကွပါတယျ။ မဲအမြားဆုံး အနိုငျရခဲ့တဲ့ အလုပျသမား ပါတီ (Labour Front) ဟာ မလေးရှား တရုတျအဖှဲ့နှငျ့ ပူးပေါငျးပွီး အစိုးရ ဖှဲ့ခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၅၅ မှာ အာဏာရလာတဲ့ အလုပျသမားပါတီ ခေါငျးဆောငျ David Marshell ဟာ မတညျငွိမျတဲ့ နိုငျငံရေး ကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဗွိတိသြှ အစိုးရရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို မရခဲ့သလို အခွား ပါတီမြားရဲ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုကိုလဲ မရခဲ့ပါဘူး။ တိုငျးပွညျရဲ့ မငွိမျမသကျမှုမြား၊ ဆန်ဒပွမှုမြားကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ၁၉၅၅ ခုနှဈ မလေမှာ Hock Lee bus ကုမ်ပဏီနဲ့ တရုတျကြောငျးသားအခြို့ ပူးပေါငျးပွီး အလုပျသမားတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးအတှကျ တောငျးဆိုဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီအရေးအခငျးကို အစိုးရက အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးရာမှာ ကြောငျးသား ၄ ယောကျ သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ မကနြေပျမှုက တနတေ့ခွား တိုးပှားလာပွီး ၁၉၅၆ မှာ တရုတျကြောငျးသားတှရေဲ့ ဆန်ဒပွမှု ထပျမံ ဖွဈပှားခဲ့ရာကစလို့ အစိုးရနဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ ကွားမှာ မကနြေပျမှုတှေ တိုးပှားလာပါတယျ။ ဒီအရေးအခငျးတှကေို လှုံ့ဆျောပေးခဲ့တာဟာ ကှနျမွူနဈတှေ ဖွဈလိမျ့မယျလို့ အမြားက လကျခံ ယုံကွညျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၅၆ ဧပွီလမှာ David Marshell ဟာ ကိုယျပိုငျ လှတျလပျရေး ရဖို့အတှကျ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို သှားရောကျ အရေးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ ပွညျတှငျးရေး မငွိမျသကျမှုကွောငျ့ စီးပှားရေး ထိခိုကျလာတာကို မထိနျးသိမျးနိုငျတဲ့ David Marshell အစိုးရကို မယုံကွညျတဲ့ အင်ျဂလိပျအစိုးရဟာ လှတျလပျရေးပေးဖို့ ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ အရေးဆိုမှု မအောငျမွငျတဲ့ David Marshellဟာ အင်ျဂလနျ အပွနျ ခရီးစဉျမှာ လကျရှိ ရာထူးကနေ နှုတျထှကျခဲ့ပါတယျ။
အသဈတကျလာတဲ့ Lim Yew Hock, က ကှနျမွူနဈတှကေို အပွငျးအထနျ နှိမျနငျးခဲ့ပါတယျ။ ကှနျမွူနဈ ထောကျခံသူတှဖွေဈတဲ့ PAP ခေါငျးဆောငျအခြို့အပါအဝငျ အလုပျသမား ခေါငျးဆောငျ အမြားအပွားကို ထောငျခခြဲ့ပါတယျ။ Lim အစိုးရရဲ့ ဦးဆောငျမှုကို နှဈခွိုကျသဘောကစြပွုလာတဲ့ အင်ျဂလိပျအစိုးရဟာ ၁၉၅၇ မှာ ကိုယျပိုငျ လှတျလပျရေး ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယျ။ ဥပဒအေကွံပေးအဖှဲ့မှာ အဖှဲ့ဝငျ ၅၂ ဦး ထိ တိုးခြဲ့ဖှဲ့စညျးမယျ၊ ဒီအဖှဲ့ဝငျတှအေားလုံးကို ပွညျသူတှကေပဲ ရှေးကောကျဖို့ စီစဉျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၅၈ ခုနှဈမှာ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ သီးခွားရပျတညျနိုငျခှငျ့အတှကျ ဗွိတိသြှ ပါလီမာနျမှာ အတညျပွု ဆုံးဖွတျခဲ့ ကွပါတယျ။
၁၉၅၉ ခုနှဈမှာ ကငျြးပတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ အမတျနရော ၅၂ နရော အနကျ PAP ပါတီက ၄၃ နရောကို အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ PAP ပါတီရဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ Cambridge ကြောငျးထှကျ တဦး ဖွဈသော Lee Kuen Yew က စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ PAP အစိုးရဟာ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ လူမှုရေး ပွသာနာမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အစီအစဉျဆှဲပွီး ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို Goh Keng Swee ဦးဆောငျပွီး ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကှနျမွူနဈ အမြားစု ပါဝငျတဲ့ PAP ပါတီရဲ့ ဦးဆောငျမှုကို စိတျမခတြဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျ အမြားစုဟာ ကှာလာလမျပူကို ပွောငျးရှခေဲ့ကွပါတယျ။
Lee နဲ့ Goh အပါအဝငျ PAP ခေါငျးဆောငျ အခြို့က စင်ျကာပူနိုငျငံကို သီးခွားရပျတညျဖို့ထကျ မလေးရှားနဲ့ ပူးပေါငျးဖို့ အားသနျခဲ့ကွပါတယျ။ သမိုငျးကွောငျးအရနဲ့ စီးပှားရေး အနအေထားအရ စင်ျကာပူဟာ မလယာ ကနေ ခှဲထှကျပွီး သီးခွားရပျတညျဖို့ ခကျခဲလိမျ့မယျလို့ Lee နဲ့ Goh တို့က တှကျခကျြခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီ အတှကျ စင်ျကာပူကို မလယာ ဒသေ (မလေးရှား) နဲ့ ပူးပေါငျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ ကွပါတယျ။ ဒါကို ကှနျမွူနဈကို ထောကျခံတဲ့ PAP ခေါငျးဆောငျ အခြို့က မလိုလားခဲ့ကွပါဘူး။ ကှနျမွူနဈ ကို မထောကျခံတဲ့ မလေး အစိုးရဟာ သူတို့အပျေါ နှိပျကှပျမှာကို စိုးရိမျခဲ့ကွပါတယျ။ တဖကျက မလေးရှား နိုငျငံ အနနေဲ့လဲ ဒီလို ပေါငျးစညျးဖို့အတှကျ PAP အစိုးရအပျေါ အယုံအကွညျ မရှိခဲ့ကွတဲ့ အပွငျ တရုတျ အမြားစု ရှိတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံနဲ့ ပူးပေါငျးခွငျးကွောငျ့ မလေးရှားနိုငျငံမှာ လူမြိုးရေး မတညျမငွိမျမှု ဖွဈလာမှာကို စိုးရိမျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၆၁ ခုနှဈမှာတော့ ကှနျမွူနဈကို ထောကျခံတဲ့ PAP ခေါငျးဆောငျ Ong Eng Guan ဟာ PAP ပါတီက ခှဲထှကျပွီး ရှေးကောကျပှဲမှာ PAP ကို အနိုငျရပွီး အမတျ ၁ နရော ရခဲ့ပါတယျ။ စင်ျကာပူမှာ ကှနျမွူနဈတှေ ကွီးစိုး လာမှာကို မလိုလားတဲ့ မလေးရှား အစိုးရ(UMNO) ဟာ Lee နဲ့ Goh တို့ လိုလားတဲ့ စင်ျကာပူ၊ မလေးရှား ပူးပေါငျးရေးကို သဘောတူခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၆၃ ဇူလိုငျလ ၉ ရကျနမှေ့ာတော့ စင်ျကာပူ၊ ဘရုနိုငျးနဲ့ အခွား မလေး ကြှနျး ၂ ခု ဖွဈတဲ့ ဆာဗာနဲ့ ဆာရဝါတို့ကို မလေးရှားပွညျထောငျစုနဲ့ ပူးပေါငျးဖို့ သဘောတူညီခဲ့ ကွပါတယျ။ မလေးရှား အစိုးရဟာ မလေး အမြားစုရှိတဲ့ ဆာဗာနဲ့ ဆာရဝါတို့ကို ပါစငျစခွေငျးအားဖွငျ့ စင်ျကာပူရဲ့ တရုတျလူမြိုးကွီးစိုးမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ စင်ျကာပူနဲ့ မလေးရှားရဲ့ ပူးပေါငျးမှုဟာ ခြောခြောမှမှေ့တေ့ော့ မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ စင်ျကာပူနိုငျငံအတှငျးရှိ တရုတျလူမြိုးတှဟော မလေးရှား အစိုးရရဲ့ လူမြိုးရေး ခှဲခွားဆကျဆံမှုအပျေါ မကမြေနပျ ဖွဈလာခဲ့ကွပါတယျ။ စင်ျကာပူနိုငျငံအတှငျးရှိ မလေးတှအေပျေါ PAP အစိုးရဟာ နှိမျ့ခဆြကျဆံခဲ့တယျလို့ မလေးရှား အစိုးရကလဲ စှပျစှဲခဲ့ပါတယျ။ အဲလို မလေးရှား အစိုးရရဲ့ သှေးထိုးပေးမှု ကွောငျ့ စင်ျကာပူ အတှငျးမှာ ရှိတဲ့ မလေးတှကေလဲ PAP အစိုးရကို မကမြေနပျဖွဈလာခဲ့ကွပါတယျ။ လှတျလပျစှာ ကူးသနျးရောငျးဝယျဖို့ သဘောတူညီကွပမေဲ့ စင်ျကာပူအတှငျးရှိ ကုနျသညျတှဟော မလေးရှား အစိုးရဲ့ ကနျ့သတျမှုတှကေို ရငျဆိုငျနရေဆဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ စင်ျကာပူဘကျလဲ ဆာဗာနဲ့ ဆာရဝါ ဒသေတှရေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှကေို မကူညီပဲ နခေဲ့ကွပါတယျ။ ၂ ဦး ၂ ဘကျ မကနြေပျမှုတှေ တိုးပှားလာတဲ့ စင်ျကာပူနဲ့ မလေးရှား အစိုးရတို့ကွား ပွသာနာတှကေို ခြုပျငွိမျးစဖေို့ မလေးရှား ဝနျကွီးက စင်ျကာပူကို မလေးရှားကနေ ခှဲထုတျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၆၅ သွဂုတျလ ၉ ရကျနမေ့နကျခငျးမှာတော့ စင်ျကာပူကို မလေးရှားကနေ ခှဲထုတျဖို့ မလေးရှား ပါလီမာနျမှာ မဲခှဲ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၂၆-၀ မဲနဲ့ ကနျ့ကှကျမဲ မရှိပဲ စင်ျကာပူကို မလေးရှားကနေ ခှဲထှကျ ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကွပါတယျ။ ခှဲထှကျဖို့ လုံးဝ မလိုလားတဲ့ လီကှနျယူက စင်ျကာပူဟာ သီးသနျ့ နိုငျငံ တခု ဖွဈသှားပွီဆိုတာကို အခုလို ကွငွောခဲ့ပါတယျ။
”ဒီနဟေ့ာ ကြှနျတော့ အတှကျတော့ ဝမျးနညျးကွကှေဲရတဲ့ နတေ့နပေ့ါပဲ။ ကြှနျတော့ ဘဝ တလြှောကျလုံးမှာ စင်ျကာပူနဲ့ မလေးရှားကို ခှဲထှကျဖို့ ဘယျတုနျးကမှ မယုံကွညျခဲ့ပါဘူး။ ၂ နိုငျငံ ပေါငျးစညျးဖို့ကို အမွဲ ယုံကွညျခဲ့သူပါ”
၄) သုညဘဝမှသညျ အာရှကြား သို့
၁၉၆၅ ခုနှဈဟာ စင်ျကာပူ နိုငျငံ လှတျလပျရေး ရတဲ့ နှဈဖွဈသလို စီးပှားရေးအားဖွငျ့ သုညဘဝကို ဆငျးသှား တယျလို့ လဲ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လီကှမျးယူ ဦးဆောငျတဲ့ ပီအပေီ ပါတီဟာ စင်ျကာပူ နိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး ကို တတိယ ကမ်ဘာကနေ ပထမကမ်ဘာကို ရောကျအောငျ ကူးပွောငျး ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
(၄-၁) ဆှမျဇာလနျ နိုငျငံအဆငျ့ ဆီသို့ (Swiss Standard of Living)
၁၉၆၁ ခုနှဈမှာ စင်ျကာပူ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ကောငျစီ Economic Development Board (EDB) ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး စင်ျကာပူ နိုငျငံရဲ့ စကျမှု လုပျငနျး တိုးတကျရေး အတှကျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျ ခဲ့ပါတယျ။ အစောပိုငျး ကာလ ၁၉ရဝနှဈလယျမြားမှာတော့ စင်ျကာပူရဲ့ စီးပှားရေးဟာ အလုပျသမားဗဟိုပွု စီးပှားရေးပုံစံ ဖွဈပါတယျ။စင်ျကာပူ အစိုးရရဲ့ စညျးစနဈ ကနြမှု၊ လာဘျစားမှုကငျးတဲ့ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးနဲ့ လုပျခနညျး ပျေါလစီတို့ကွောငျ့ နိုငျငံခွား ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီတှဟော စင်ျကာပူနိုငျငံအတှငျးကို အလုံးအရငျးနဲ့ ဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါတှဟော စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို အကူအညီ အမြားကွီး ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
၁၉၇၉ ခုနှဈမှာတော့ ပီအပေီအစိုးရဟာ လုပျခနညျး ပျေါလစီအစား စီးပှားရေး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနဲ့ နညျးပညာ လုပျငနျးတှကေို ဦးစားပေး ဆောငျရှကျလာပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ၁၉၈၀ ခုနှဈ မှာတော့ ကှနျပွူတာနဲ့ ကှနျပွူတာဆိုငျရာ နညျးပညာလုပျငနျးမြားကို အထူးစီမံကိနျးနဲ့ တိုးတကျအောငျ စီမံ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၄မှာ ပီအပေီ အစိုးရဟာ စင်ျကာပူနိုငျငံကို ဆှမျဇာလနျ နိုငျငံရဲ့ အနေ အထားသို့ ရောကျအောငျ ပို့ပေးမယျလို့ကွှေးကွျောခဲ့ပါတယျ။
၁၉၈၅-၈၆ စီးပှားရေးပကျြကပျကို ကွုံရပွီးတဲ့ နောကျမှာတော့ စင်ျကာပူအစိုးရဟာ ကုနျထုတျမှု လုပျငနျးမြား၊ ဘဏာရေးနှငျ့ နိုငျငံတကာ အကွား ကူးလူး ဆကျဆံမှု လုပျငနျးတှေ အပျေါမှာ အားစိုကျ ဆောငျရှကျလာ စခေဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၀ ကာလမြားမှာတော့ စင်ျကာပူ နိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး ပုံစံဟာ ကုနျထုတျလုပျမှု လုပျငနျးမြား အပွငျ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြားအပျေါမှာ ဦးစားပေး လာခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၁ ခုနှဈမှာတော့ နညျးဗြူဟာကြ စီးပှားရေးပုံစံ (Strategic Economic Plan)ကို ခမြှတျပွီး နိုငျငံတကာ ပို့ကုနျလုပျငနျးမှာ ယှဉျပွိုငျနိုငျဖို့အတှကျ ပညာရေးနဲ့လူ့အရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို အားစိုကျ ဆောငျရှကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြားကို ပံ့ပိုးပေးသညျ့အပွငျ Operational Headquarters (OHQ) program ကို ခမြှတျပွီး ကုမ်ပဏီမြားကို စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ ဗဟိုဌာန ထားရှိကွဖို့ တိုကျတှနျး ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယျ။ အနုပညာဆိုငျရာ လုပျငနျးမြား၊ ဖြျောဖွမှေုလုပျငနျးမြားနှငျ့ မီဒီယာ လုပျငနျးမြားကိုပါ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျလာကွပါတယျ။ ကုနျထုတျလုပျငနျးအဆငျ့ကနေ innovation-driven လုပျငနျးမြား အဆငျ့ကို တိုးမွှငျ့လာခဲ့ပါတယျ။ စင်ျကာပူ၊ ဂြိုဟောနဲ့ အငျဒိုနီးရှားတို့ ပူးပေါငျးပွီး ဘာတနျ ကြှနျး ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျဖို့ စင်ျကာပူက ဦးဆောငျ စညျးရုံးခဲ့ပါတယျ။ အခု ပရိုဂရမျကွောငျ့ စင်ျကာပူဟာ လုပျခနညျး အလုပျသမားတှကေို အသုံးခခြှငျ့ ရပွီး သူ့ရဲ့ စကျမှုလုပျငနျး ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျခဲ့ပါ တယျ။
၁၉၉၆-၉၇ မှာ ဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ အာဆီယမျ စီးပှားရေး ပကျြကပျဟာ စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ မှုကို ယာယီသာ အဟနျ့အတား ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ စင်ျကာပူနိုငျငံ၏ စကျမှုလုပျငနျး ဖှံ့ဖွိုးမှုကို အဓိကအတား အဆီး ဖွဈစတေဲ့ အခကျြကတော့ လုပျခ လစာတှေ မွငျ့တကျလာခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပွသာနာကို ဖွရှေငျး နိုငျဖို့ အတှကျ စင်ျကာပူ အစိုးရဟာ အထှထှေေ ကုနျကစြရိတျတှကေို လြော့ခဖြို့ ကွိုးစားခွငျး၊ ကုနျထုတျမှု စှမျးရညျ မွှငျ့တငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားခွငျးမြားဖွငျ့ လုပျခ လစာတှေ မွငျ့တကျလာခွငျးကို ထိနျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါ တယျ။ စင်ျကာပူ ငှကွေေးမာလာခွငျးဟာလဲ နိုငျငံခွား ကုမ်ပဏီတှအေနနေဲ့ စင်ျကာပူ နိုငျငံက ထှကျခှာလာဖို့ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါကိုတော့ အစိုးရဟာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု မြားတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို ဦးစားပေးခွငျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးပေးခဲ့ပါတယျ။၂၀၀၁ ခုနှဈမှာဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ dot.com ရဲ့ ပွိုလဲခွငျး၊ အမရေိကနျနိုငျငံ စကျတငျဘာ ၁၁ အရေးအခငျးတို့က စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးကို ပိုမိုဂယကျ ရိုကျစခေဲ့ပါတယျ။
၂၀၀၃ ခုနှဈမှာတော့ စင်ျကာပူ အစိုးရက ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးမှာ အခကျြအခြာကသြော နိုငျငံ (Global City) အဖွဈကို ကူးပွောငျးမယျလို့ ကွှေးကွျောခဲ့ပါတယျ။
၅) ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားနှငျ့ စင်ျကာပူ နိုငျငံရေး
စင်ျကာပူ နိုငျငံ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုရဲ့ အဓိက အကွောငျးဟာ နိုငျငံရေး တညျငွိမျမှုကွောငျ့လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ မလေးရှား နိုငျငံက ခှဲထှကျလာခြိနျကစလို့ စင်ျကာပူ နိုငျငံရေးကို PAP (People’s Action Party)က ဦးဆောငျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ PAP အစိုးရရဲ့ နိုငျငံရေး အုပျခြုပျမှုဟာ ဒီမိုကရစေီ စံနှုနျးတှထေကျ နိုငျငံရေး တညျငွိမျမှုကို ဦးစားပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖွဈ လူသိမြားပါတယျ။ စင်ျကာပူနိုငျငံ လှတျလပျရေး ရခြိနျကစလို့ ၄ နှဈ တကွိမျ (သို့) ၅ နှဈတကွိမျ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲ တိုငျးမှာ PAP (People’s Action Party) ပါတီဟာ အမတျနရော အမြားစုနဲ့ အမွဲ အနိုငျရခဲ့ ပါတယျ။ အဲဒီလို အနိုငျရမှုတှကွေောငျ့လဲ PAP ပါတီဟာ နိုငျငံရေး ပျေါလစီတှကေို စဉျဆကျမပွတျ ကငျြ့သုံးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါမို့လဲ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှကေို PAP ပါတီဟာ အောငျမွငျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ရာစုနှဈ ၂ ခု အတှငျးမှာ စင်ျကာပူနိုငျငံဟာ နိုငျငံ တကာက အသိအမှတျပွုရလောကျအောငျ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခဲပါ့တယျ။ အခွခေံ လိုအပျခကျြ တှေ ဖွဈတဲ့ အိမျယာ၊ ပညာရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေး ကိစ်စတှမှော ပွညျသူအမြားစု ကနြေပျအောငျ PAP အစိုးရ ဟာ စှမျးဆောငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှနေဲ့ ရတေို ရရှေညျ စီမံကိနျးတှကေို ခမြှတျ ရာမှာ PAP အစိုးရဟာ မှနျမှနျကနျကနျ ဆုံးဖွတျနိုငျခဲ့မှုတှဟော PAP ပါတီဟာ ပွညျသူတှရေဲ့ ထောကျခံမှု တှကေို ရရှိစခွေငျး အကွောငျးရငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အငျအားကောငျးတဲ့ အတိုကျအခံ ပါတီ မရှိခွငျး ဟာလဲ PAP ပါတီ အောငျမွငျရတဲ့ တကွောငျးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
၆) နိုငျငံရေး လှညျ့ကှကျမြားနဲ့ PAP
PAP ပါတီဟာ နိုငျငံရေးကို လှမျးမိုးထိနျးသိမျးနိုငျဖို့ အစီအစဉျမြားကို သခြောခမြှတျ ဆောငျရှကျ ခဲ့ပါတယျ။
၁၉၆၀ ဇူလိုငျလ ၁ ရကျနမှေ့ာ လူထုပါတီလို့ အမညျရတဲ့ The People’s Association (PA) အသငျးကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအသငျးဟာ ပွညျသူတှရေဲ့ ကွားထဲမှာ လူမြိုးရေး ညီညှတျမှုနဲ့ ရပျကှကျဒသေတှေ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှုကို ဆောငျရှကျနိုငျဖို့လို့ အမညျခံခဲ့ပမေဲ့ ဒီအသငျးဟာ PAP အစိုးရရဲ့ ကြောထောကျ နောကျခံ အသငျးတခုဆိုတာ သိသာထငျရှားနပေါတယျ။
၁၉၈၁ ရှေးကောကျပှဲ မှာတော့ PAP ပါတီဟာ ပထမဆုံး အမတျနရော ၁ နရောကို အလုပျသမားပါတီက J.B. Jeyaretnam ဆီမှာ လကျလှတျဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ ၁၉၈၄ မှာ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အလုပျသမားပါတီ က အမတျ တနရောနဲ့ စင်ျကာပူ ဒီမိုကရစေီပါတီက အမတျ တနရောကို အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ ၁၉၉၆ မှာတော့ အမတျ ၄ နရော အထိ လကျလှတျခဲ့ရပွီး ၂၀၁၁ ရှေးကောကျပှဲဟာတော့ PAP ပါတီရဲ့ သမိုငျး ကွောငျးအတှကျ အမညျးစကျတှငျ စတေဲ့ နှဈလို့ ဆိုရလောကျအောငျ မဲအနဲငယျနဲ့သာ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။
အမတျနရော ၆ နရောကို အတိုကျအခံ ပါတီတှဆေီကို လကျလှတျဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။
ဒီရှေးကောကျပှဲတှရေဲ့ ရလဒျဟာ PAP ပါတီရဲ့ အခွအေနကေို မီးမောငျးထိုးပွသလို ဖွဈနပေါတယျ။ PAP ပါတီဟာ ဟိုးတခြိနျကလို လူကွိုကျမမြားလာတော့ဘူးဆိုတာ သိသာထငျရှားစတေဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒါတှေ ဘာလို့ ဖွဈရသလဲ။ ဒီအခကျြတှကေို လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ အကွောငျးအခကျြမြားစှာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံး အခကျြကတော့ PAP ပါတီဟာသူရဲ့အောငျမွငျ တိုးတကျမှုကို သူကိုယျတိုငျ မနိုငျတော့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခကျအခဲ အကွပျအတညျးမြားစှာကို ဖွရှေငျးနိုငျခဲ့တဲ့ PAP အစိုးရအပျေါမှာ ပွညျသူတှကေ ပိုလို့ ပိုလို့ မြှျောလငျ့လာခဲ့ပါတယျ။ ဒီ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို PAP အစိုးရအနနေဲ့ ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ ခကျခဲ လာပါတယျ။ ဒုတိယ အခကျြကတော့ ခတျေပညာတတျ လူလတျတနျးစားလူငယျတှေ ပိုမို မြားပွားလာခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလူငယျတှဟော ခတျေပညာတတျတှေ ဖွဈတာနဲ့အညီ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီ သဘော တရားမြားကို ပိုလို့ တောငျးဆို သိမွငျလာကွပါတယျ။ တတိယအခကျြကတော့ PAP အစိုးရရဲ့ အမှား မကငျးသော ပျေါလစီ အခြို့ကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နိုငျငံခွားသား အမြားအပွား နိုငျငံ တှငျး ဝငျရောကျလာခွငျးကို ပွညျသူအမြားစုက မကမြေနပျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
PAP ပါတီဟာ စင်ျကာပူ နိုငျငံရေးကို ဆကျလကျ လှမျးမိုးထားနိုငျဖို့နဲ့ ပွညျသူတှေ အစိုးရအပျေါ ကနြေပျ လာစဖေို့ နညျးအမြိုးမြိုး၊ ပျေါလစီ အမြိုးမြိုးကို ခမြှတျ ကငျြ့သုံးလာခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၅ ခုနှဈမှာ ပွညျသူတှေ ရဲ့ အသံကို နားထောငျနိုငျဖို့ Public Feedback Unit ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။
ကိုးကား၊ NTU Engineering & Society Lecture notes by Prof Tan Chye Guan and references therein.
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြ။ ။ နိုငျငံ တနိုငျငံ ဟာ စဈရေး အရ အခကျြအခြာကတြဲ့ နရောတခု ဖွဈနခွေငျးဟာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ လုံလောကျတဲ့ အခကျြ မဖွဈပါဘူး။ စဈရေးအရ အခကျြအခြာကခြွငျးဟာ နိုငျငံအတှကျ အန်တရာယျတှကေို ဖိတျချေါစတေဲ့အတှကျ အကောငျးထကျ အဆိုးကို ဖွဈစပေါတယျ။ တဖကျက ကွညျ့မယျဆိုရငျလဲ စီးပှားရေး အရ အခကျြအခြာကတြဲ့နရော တခုဖွဈဖို့ လုံလောကျတဲ့ နိုငျငံရေး ကာကှယျမှု ရှိရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ စဈရေး နဲ့ နိုငျငံရေး မတူညီတာကို သတိပွုဖို့ လိုပါတယျ။
ယနေ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများထဲတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေသည်ဆိုသည်မှာ မည်သူမှ မငြင်းဆိုနိုင်သော အမှန်တရား ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ် မရှိသော၊ သီးခြား ရပ်တည် နိုင်စွမ်း မရှိသော စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ဘာကြောင့် တိုးတက်အောင်မြင်ရသလဲ… လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁) စင်္ကာပူ၏ မြစ်ဖျားခံရာ
စင်္ကာပူ နိုင်ငံလို့ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ဒီကျွန်းစုလေးတွေမှာ လူတွေစတင်နေထိုင်တယ်လို့ ယူဆရတာကတော့ ဒုတိယ ရာစုနှစ် အစမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုမာထြားကျွန်းစုတွေ(ယခု အင်ဒိုနီးရှား)တို့ရဲ့ ဘုရင့် မင်းနေပြည်တော် အတွက် ဆိပ်ကမ်းမြို့ငယ်လေးအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က တီမားဆက်(Temasak)၊ ပင်လယ်မြို့လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၄ရာစု နှောင်းပိုင်းကာလမှာတော့ မာလကာနိုင်ငံ (Sultanate of Malacca) အင်အားကြီးမားလာပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်းစုတော်တော်များကို နယ်ချဲ့ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ပါယာရဲ့ မင်းနေပြည်တော်ကို မာလာကာမြို့လို့ အခြေံခံထားပြီး မြောက်ဖက်မှာတော့ အယုဒ္ဗယ မြို့တော် (ယခု ထိုင်းနိုင်ငံ) နဲ့ အနောက်တောင်မှာတော့ ဆုမာထြာအထိ နယ်မြေချဲ့ထွင်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ၁၅၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီတွေဟာ အမွှေးအကြိုင် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းတွေ ကို လက်ဝါးကြီး အုပ်နိုင်ဖို့ မာလကာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပေါ်တူဂီတွေကို စစ်ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ မာလကာ ဘုရင်ဟာ မာလကာ မြို့တော်ကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ မာလကာ ဘုရင်ဟာ ဘင်တန်ကို ခြေကုပ်ယူကာ မြို့တော် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပေါ်တူဂီတွေကို ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ၁၅၂၆ မှာတော့ ပေါ်တူဂီတွေဟာ ဘင်တန်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး မာလကာ ဘုရင်ကို အပြီးသတ် ချေမှုန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၁၅၂၈ မှာတော့ မာလကာ ဘုရင်ရဲ့ သားတော် ၂ ပါးအနက် အငယ် မင်းသား Alauddin Riayat Shah II က ဂျိုဟောနဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်းစုတွေ (စင်္ကာပူဖြစ်လာမည့် ကျွန်းစုများ အပါအ၀င်) ကို အခြေစိုက်ပြီး ဂျိုဟော အင်ပါယာကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုဟောဟာ ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု၊ စုမာထြားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြားမှာပဲ တဖြေးဖြေး အင်အားကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုဟော ဘုရင်ဟာ ပေါ်တူဂီတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ တချိန်လုံး ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ စုမာထြားမြောက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ Ache လူမျိုး (မူဆလင်) တွေက မာလကာ ရေလက်ကြားကို လွှမ်းမိုးလာကြပါတယ်။ မူဆလင် ကုန်သယ်တွေဟာ ပေါ်တူဂီ (ခရစ်ယန်)တွေ လွှမ်းမိုးတဲ့ မာလကာ အစား မူဆလင်မြို့ဖြစ်တဲ့ Ache ကို ဦးစားပေး ကုန်သွယ်လာကြပါတယ်။ ပေါ်တူဂီတွေ (မာလကာ) နဲ့ ဂျိုဟော ကြား အပြန်အလှန် စစ်ဖြစ်နေချိန်မှာ Ache ဟာ တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို Ache ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံလာရတဲ့ ပေါ်တူဂီတွေနဲ့ ဂျိုဟောဟာ ယာယီ စစ်ပြေငြိမ်းမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး Ache ကို ဖိနှိမ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။Ache တွေကို နှိမ်နင်းပြီးနောက် ပေါ်တူဂီတွေနဲ့ ဂျိုဟောဟာ စစ်ဖြစ်ကြပြန် ပါတယ်။
၁ရ ရာစု အစောပိုင်းကာလမှာတော့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေက အရှေ့တောင် အာရှ ကုန်သွယ်မှုထဲကို စီးဝင်လာ ကြပါတယ်။ ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီး အုပ်စိုးမှုကို မခံနိုင်တဲ့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေဟာ ဂျိုဟောနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပေါ်တူဂီတွေကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၆၄၂ မှာ ဒတ်ခ်ျနဲ့ ဂျိုဟော တို့ဟာ ပေါ်တူဂီတို့ကို မာလကာ မြေပေါ်က မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆၀၆ မှာ ဒတ်ခ်ျနဲ့ ဂျိုဟောတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အရ ဒတ်ခ်ျ လူမျိုးတွေက ဂျိုဟောကို စစ်မကြေငြာဖို့ သဘောတူညီချက်နဲ့ မာလကာ ဒေသကို အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒတ်ခ်ျတွေဟာ မာလကာ ရေလက်ကြားအစား ဆန်ဒါ ရေလက်ကြား (straits of sunda) ကို စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ စင်္ကာပူ ဖြစ်လာမဲ့ ကျွန်းစုလေးတွေဟာလဲ ငါးဖမ်းသမားတွေ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာလေး အဖြစ်သာ တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေ ၁၀၀၀ လောက်သာ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး အများစုက မလေးလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး တရုတ်လူမျိုး အနဲငယ်လဲ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၇ ရာစု နှောင်းပိုင်းမှာတော့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေဟာ ဒတ်ခ်ျ နိုင်ငံကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ဒတ်ချပ်တို့ရဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မာလကာ (ဂျာဗား) ဒေသကိုလဲ ပြင်သစ်တို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒတ်ခ်ျတွေက စစ်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ ဗြိတိသျှ (အင်္ဂလိပ်)တို့ကို သူတို့ရဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံငယ်တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှ လူမျိုးတွေဟာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို တိုက်ထုတ်ပြီးနောက် ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေကို ဒတ်ခ်ျကို ပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗြိတိသျှ အရာရှိငယ်နဲ့ ကုန်သည်ကြီးတွေဟာ ဒတ်ခ်ျတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို မကျေ မနပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
၂) ရွှေရောင်နေ့ရက်များ၏ အစ
၁၈၁၉ မှာ Thomas Stamford Raffles ဟာ အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဂျိုဟော ဘုရင်ပိုင် စင်္ကာပူ တောင်ပိုင်း ကျွန်းစုတွေကို ဗြိတိသျှရဲ့ ကုန်သွယ်မှု အခြေစိုက် စခန်း အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ ဂျိုဟော ဘုရင်နဲ့ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Raffles ရဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေါ်လစီကြောင့် ကုန်သည်ကြီးများဟာ စင်္ကာပူကို အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာကြ ပါတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေက Raffles ရဲ့ အထက်လူကြီးများကို တင်ပြပြီး Raffles ကို စင်္ကာပူကနေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗြိတိသျှကုန်သည်များက စင်္ကာပူကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ပါလီမာန်မှာ အောင်မြင်စွာ အဆိုပြု တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှနဲ့ ဒတ်ခ်ျ (နယ်သာလန်) အကြား သဘောတူညီမှု ရယူပြီး မာလကာ၊ ပီနန်းနဲ့ စင်္ကာပူ ကျွန်းစု အားလုံးကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီက လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒေသတွေကို ဗြိတိသျှပိုင် နယ်မြေများ (Straits Settlements) အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပီနန်းကို မြို့တော်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၃၂ မှာတော့ မြို့တော်ကို စင်္ကာပူအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါတယ်။ အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ကို မနှစ်သက်တဲ့ (Straits Settlements အတွင်း နေထိုင်သူ) ယူရိုပီယံ နိုင်ငံသား တွေဟာ ဗြိတိသျှ ပါလီမာန်မှာ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်မှုကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၆၇ မှာ ဗြိတိသျှပိုင် နယ်မြေများ (Straits Settlements) ဟာ ဗြိတိသျှရဲ့ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကာလမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများဟာ မလေး ပြည်နယ်၊ ကျွန်းစု အများစုကို သိမ်းပိုက် လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှ အစိုးရဟာ ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှာ မလေးကျွန်း (malay peninsulas) ပေါ်ရှိ ပြည်နယ် လေးခုကို ပေါင်း စည်းပြီး ဖယ်ဒရယ်မူဖြင့် အုပ်ချုပ်သော မလေးပြည်နယ်များ၊ Federated Malay States (FMS) လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကွာလာလမ်ပူ ကို FMS ရဲ့မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်ရေးနှင့် သံတမာန်ရေးရာတို့တွင် ဗဟိုအစိုးရ (အင်္ဂလိပ် အစိုးရ)က တိုက်ရိုက်ချုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများအနေဖြင့် အစ်စလာမ်ဘာသာဆိုင်ရာနှင့် ပြည်တွင်း အရေးအခင်းများကိုသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ မလေးကျွန်းစုပေါ်ရှိ အခြား ပြည်နယ် ၅ ခုကိုတော့ ဖယ်ဒရယ်မူဖြင့် မအုပ်ချုပ် သော မလေးပြည်နယ်များ၊ UnFederated Malay States လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပြည်နယ်များဟာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင် ဘုရင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Federated Malay States၊ UnFederated Malay States၊နှင့် Straits Settlements ပေါင်း ၃ ခုကို မလယာ ဒေသလို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ မလယာ ဒေသဟာ ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တင်း၊ ရာဘာ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့ ဂျပန်တွေဟာ မာလယာကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။ ၁၉၄၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှာ ဂျပန်ကို စစ်ရှုံးသွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မာလယာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်တွေ ဟာ မာလယာဒေသကို ၃ နှစ်တာ အုပ်စိုးပြီးနောက် ၁၉၄၅ မှာတော့ အင်္ဂလိပ်တွေက မလယာ ဒေသကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာတော့ Federated Malay States၊ UnFederated Malay States အတွင်းရှိ ပြည်နယ် ၉ ခု နှင့် အတူ Straits Settlements အတွင်းရှိ ပြည်နယ် ၂ ခု (ပီနန်းနှင့် မလကာ) တို့ကို တစုတည်း ပေါင်းစည်းပြီး ဗြိတိသျှ အစိုးရ၏နိုင်ငံ အဖြစ် မလယာ ပြည်ထောင်စု ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါ တယ်။ မလေး လူမျိုးများရဲ့ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာတော့ မလယာ ပြည်ထောင်စု ကို မလယာ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု (ပီနန်းနှင့် မလကာမှအပ ကျန်မလေးပြည်နယ်များ အနေနဲ့ ပြည်တွင်း အရေးအခင်းများတွင် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိသော) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။အဲဒီကာလ မှာ စင်္ကာပူဟာ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီ နိုင်ငံအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၇ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာတော့ ဗြိတိသျှ အစိုးရက မလယာ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု Commonwealth အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် မှာတော့Straits Settlements အတွင်းရှိ စင်္ကာပူ အပါအ၀င် အခြားပြည်နယ်များဟာ မလယာ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပေါင်းစည်းပြီး ယနေ့ မလေးရှားနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ မလေးရှားက ခွဲထွက်ပြီး သီးသန့်နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။
၃) စင်္ကာပူ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
၁၉၄၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး) စင်္ကာပူဟာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံ အဖြစ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့် ရေပေးဝေရေး စနစ်အပါအ၀င် စနစ်တော်တော်များများ ဟာ စစ်ကာလအတွင်း ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ စစ်ကြီးရဲ့ စစ်ပြီးကာလ အကျိုးဆက်အဖြစ် အစာ ရေစာ ရှားပါးခြင်း၊ ရောဂါ ထူပွားခြင်းတို့ကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားတွေ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို စစ်တွင်း ကာလနဲ့ စစ်ပြီးကာလရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ခံစားလာရတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အပေါ် သံသယ ၀င်လာကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ရေးကို လိုလားတဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ လဲ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှ အစိုးရ အနေနဲ့ကလဲ စင်္ကာပူ နဲ့ မလယာ ဒေသတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတော့မယ်ဆိုတာကို ကြိုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ Straits Settlements ကို ဖြိုခွဲပြီး Straits Settlements အတွင်း ပြည်နယ် ၂ ခုနဲ့ မလေး ပြည်နယ်များကို ပေါင်းစည်းပြီး မလယာ ပြည်ထောင်စုကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ (စင်္ကာပူ မှတ်စု-၁ စာပိုဒ် ၂ ကို ကိုးကားရန်)။
စင်္ကာပူနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံ အဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပေမဲ့ (အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ရွေးချယ် ခန့်အပ်သော) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက် ထားရှိပြီး နိုင်ငံတွင်း ပြသာနာများကို ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာတော့ သီးသန့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့အတွက် အမတ်များကို ပြည်သူများက ရွေးချယ် တင်မြှောက်နိုင်သည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်မှာ ကျင်းပ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့မှာ အမတ် ၂၂ ဦးပါရှိပြီး ၁၃ နေရာကို ဗြိတိသျှအစိုးရက ရွေးချယ် ခန့်အပ်ပြီး၊ ၃ နေရာကိုတော့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၃ ခုက ကိုယ်စားလှယ်များကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျန် ၆ နေရာကိုသာ အမတ်လောင်းများက ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ပြည်သူများက မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ၃ နေရာကို စင်္ကာပူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (singapore Progressive Party) က ရရှိခဲ့ပြီး ကျန် ၃ နေရာကို သီးသန့်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူ အမတ်များက ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူ အများစုက မနှစ်သက်ခဲ့ကြပါဘူး။ မဲပေးနိုင်ခွင့် ရှိသူ လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ၀င်ရောက် မဲပေးခဲ့ ကြပါတယ်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာတော့ ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့အတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အမတ်နေရာ ၉ နေရာထိ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (singapore Progressive Party)က ၆ နေရာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ ပြောရေးဆိုခွင့် အနည်းငယ် ရရှိလာပေမဲ့ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်မှုက အားသာနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မလယာ ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ထကြွပုန်ကန်မှုကလဲ အားကောင်းလာပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာ ကွန်မြူနစ်တွေကို အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းပြီးနောက် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို အကန့်အသတ်များနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ တယ်။
၁၉၅၅ မှာ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ အသစ်ကို ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာ အမတ် ၃၂ ဦး ပါရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၅ နေရာကို ပြည်သူများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ရပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် အမတ်များကို ပါလီမာန်စနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ (cabinet) အဖြစ် ခန့်အပ်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရအနေနဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ သံတမာန်ရေးရာများကိုဆဲ ထိန်းချုပ်ထားဆဲဆိုပေမဲ့ ၁၉၅၅ မှာ ကျင်းပတဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ စာရင် တရားမျှတတယ်လို့ အများက လက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။ စင်္ကာပူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (singapore Progressive Party)က ၄ နေရာသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး၊ အလုပ်သမား ပါတီ (Labour Front) က ၁၀ နေရာ အနိုင်ရခဲ့ကာ၊ မလေးရှား တရုတ်အဖွဲ့ UMNO–MCA က ၃ နေရာ အသီးသီး အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အသစ် ပါတီ တခုဖြစ်တဲ့ People’s Action Party (PAP) က ၃ နေရာ အနိုင်ရ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ မဲအများဆုံး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အလုပ်သမား ပါတီ (Labour Front) ဟာ မလေးရှား တရုတ်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အစိုးရ ဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၅၅ မှာ အာဏာရလာတဲ့ အလုပ်သမားပါတီ ခေါင်းဆောင် David Marshell ဟာ မတည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို မရခဲ့သလို အခြား ပါတီများရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကိုလဲ မရခဲ့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ မငြိမ်မသက်မှုများ၊ ဆန္ဒပြမှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် မေလမှာ Hock Lee bus ကုမ္ပဏီနဲ့ တရုတ်ကျောင်းသားအချို့ ပူးပေါင်းပြီး အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအရေးအခင်းကို အစိုးရက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရာမှာ ကျောင်းသား ၄ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မကျေနပ်မှုက တနေ့တခြား တိုးပွားလာပြီး ၁၉၅၆ မှာ တရုတ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှု ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကစလို့ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြားမှာ မကျေနပ်မှုတွေ တိုးပွားလာပါတယ်။ ဒီအရေးအခင်းတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာဟာ ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အများက လက်ခံ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၅၆ ဧပြီလမှာ David Marshell ဟာ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ရေး ရဖို့အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို သွားရောက် အရေးဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်မှုကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်လာတာကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ David Marshell အစိုးရကို မယုံကြည်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာ လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အရေးဆိုမှု မအောင်မြင်တဲ့ David Marshellဟာ အင်္ဂလန် အပြန် ခရီးစဉ်မှာ လက်ရှိ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အသစ်တက်လာတဲ့ Lim Yew Hock, က ကွန်မြူနစ်တွေကို အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ် ထောက်ခံသူတွေဖြစ်တဲ့ PAP ခေါင်းဆောင်အချို့အပါအ၀င် အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင် အများအပြားကို ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ Lim အစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို နှစ်ခြိုက်သဘောကျစပြုလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာ ၁၉၅၇ မှာ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ရေး ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် ၅၂ ဦး ထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်၊ ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို ပြည်သူတွေကပဲ ရွေးကောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ သီးခြားရပ်တည်နိုင်ခွင့်အတွက် ဗြိတိသျှ ပါလီမာန်မှာ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်နေရာ ၅၂ နေရာ အနက် PAP ပါတီက ၄၃ နေရာကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ PAP ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Cambridge ကျောင်းထွက် တဦး ဖြစ်သော Lee Kuen Yew က စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ PAP အစိုးရဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို Goh Keng Swee ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်မြူနစ် အများစု ပါဝင်တဲ့ PAP ပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို စိတ်မချတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အများစုဟာ ကွာလာလမ်ပူကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
Lee နဲ့ Goh အပါအ၀င် PAP ခေါင်းဆောင် အချို့က စင်္ကာပူနိုင်ငံကို သီးခြားရပ်တည်ဖို့ထက် မလေးရှားနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ အားသန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရနဲ့ စီးပွားရေး အနေအထားအရ စင်္ကာပူဟာ မလယာ ကနေ ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ Lee နဲ့ Goh တို့က တွက်ချက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် စင်္ကာပူကို မလယာ ဒေသ (မလေးရှား) နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒါကို ကွန်မြူနစ်ကို ထောက်ခံတဲ့ PAP ခေါင်းဆောင် အချို့က မလိုလားခဲ့ကြပါဘူး။ ကွန်မြူနစ် ကို မထောက်ခံတဲ့ မလေး အစိုးရဟာ သူတို့အပေါ် နှိပ်ကွပ်မှာကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တဖက်က မလေးရှား နိုင်ငံ အနေနဲ့လဲ ဒီလို ပေါင်းစည်းဖို့အတွက် PAP အစိုးရအပေါ် အယုံအကြည် မရှိခဲ့ကြတဲ့ အပြင် တရုတ် အများစု ရှိတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းခြင်းကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေး မတည်မငြိမ်မှု ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကွန်မြူနစ်ကို ထောက်ခံတဲ့ PAP ခေါင်းဆောင် Ong Eng Guan ဟာ PAP ပါတီက ခွဲထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ PAP ကို အနိုင်ရပြီး အမတ် ၁ နေရာ ရခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကွန်မြူနစ်တွေ ကြီးစိုး လာမှာကို မလိုလားတဲ့ မလေးရှား အစိုးရ(UMNO) ဟာ Lee နဲ့ Goh တို့ လိုလားတဲ့ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား ပူးပေါင်းရေးကို သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၆၃ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ စင်္ကာပူ၊ ဘရုနိုင်းနဲ့ အခြား မလေး ကျွန်း ၂ ခု ဖြစ်တဲ့ ဆာဗာနဲ့ ဆာရ၀ါတို့ကို မလေးရှားပြည်ထောင်စုနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ သဘောတူညီခဲ့ ကြပါတယ်။ မလေးရှား အစိုးရဟာ မလေး အများစုရှိတဲ့ ဆာဗာနဲ့ ဆာရ၀ါတို့ကို ပါစင်စေခြင်းအားဖြင့် စင်္ကာပူရဲ့ တရုတ်လူမျိုးကြီးစိုးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှားရဲ့ ပူးပေါင်းမှုဟာ ချောချောမွေ့မွေ့တော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ မလေးရှား အစိုးရရဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်းရှိ မလေးတွေအပေါ် PAP အစိုးရဟာ နှိမ့်ချဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့ မလေးရှား အစိုးရကလဲ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲလို မလေးရှား အစိုးရရဲ့ သွေးထိုးပေးမှု ကြောင့် စင်္ကာပူ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မလေးတွေကလဲ PAP အစိုးရကို မကျေမနပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဖို့ သဘောတူညီကြပေမဲ့ စင်္ကာပူအတွင်းရှိ ကုန်သည်တွေဟာ မလေးရှား အစိုးရဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စင်္ကာပူဘက်လဲ ဆာဗာနဲ့ ဆာရ၀ါ ဒေသတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို မကူညီပဲ နေခဲ့ကြပါတယ်။ ၂ ဦး ၂ ဘက် မကျေနပ်မှုတွေ တိုးပွားလာတဲ့ စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှား အစိုးရတို့ကြား ပြသာနာတွေကို ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ မလေးရှား ၀န်ကြီးက စင်္ကာပူကို မလေးရှားကနေ ခွဲထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၅ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့ စင်္ကာပူကို မလေးရှားကနေ ခွဲထုတ်ဖို့ မလေးရှား ပါလီမာန်မှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၂၆-၀ မဲနဲ့ ကန့်ကွက်မဲ မရှိပဲ စင်္ကာပူကို မလေးရှားကနေ ခွဲထွက် ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ခွဲထွက်ဖို့ လုံးဝ မလိုလားတဲ့ လီကွန်ယူက စင်္ကာပူဟာ သီးသန့် နိုင်ငံ တခု ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကို အခုလို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
”ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့ နေ့တနေ့ပါပဲ။ ကျွန်တော့ ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှားကို ခွဲထွက်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ၂ နိုင်ငံ ပေါင်းစည်းဖို့ကို အမြဲ ယုံကြည်ခဲ့သူပါ”
၄) သုညဘ၀မှသည် အာရှကျား သို့
၁၉၆၅ ခုနှစ်ဟာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့ နှစ်ဖြစ်သလို စီးပွားရေးအားဖြင့် သုညဘ၀ကို ဆင်းသွား တယ်လို့ လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လီကွမ်းယူ ဦးဆောင်တဲ့ ပီအေပီ ပါတီဟာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကို တတိယ ကမ္ဘာကနေ ပထမကမ္ဘာကို ရောက်အောင် ကူးပြောင်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၄-၁) ဆွမ်ဇာလန် နိုင်ငံအဆင့် ဆီသို့ (Swiss Standard of Living)
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ စင်္ကာပူ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကောင်စီ Economic Development Board (EDB) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စင်္ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်ရေး အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်း ကာလ ၁၉၇၀နှစ်လယ်များမှာတော့ စင်္ကာပူရဲ့ စီးပွားရေးဟာ အလုပ်သမားဗဟိုပြု စီးပွားရေးပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။စင်္ကာပူ အစိုးရရဲ့ စည်းစနစ် ကျနမှု၊ လာဘ်စားမှုကင်းတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ခနည်း ပေါ်လစီတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြား ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်းကို အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကူအညီ အများကြီး ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာတော့ ပီအေပီအစိုးရဟာ လုပ်ခနည်း ပေါ်လစီအစား စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ နည်းပညာ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှာတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းများကို အထူးစီမံကိန်းနဲ့ တိုးတက်အောင် စီမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၄မှာ ပီအေပီ အစိုးရဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ဆွမ်ဇာလန် နိုင်ငံရဲ့ အနေ အထားသို့ ရောက်အောင် ပို့ပေးမယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၅-၈၆ စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကို ကြုံရပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ စင်္ကာပူအစိုးရဟာ ကုန်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ဘဏာရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ အကြား ကူးလူး ဆက်ဆံမှု လုပ်ငန်းတွေ အပေါ်မှာ အားစိုက် ဆောင်ရွက်လာ စေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ကာလများမှာတော့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ အပြင် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအပေါ်မှာ ဦးစားပေး လာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာတော့ နည်းဗျူဟာကျ စီးပွားရေးပုံစံ (Strategic Economic Plan)ကို ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ပညာရေးနဲ့လူ့အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားစိုက် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် Operational Headquarters (OHQ) program ကို ချမှတ်ပြီး ကုမ္ပဏီများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ဗဟိုဌာန ထားရှိကြဖို့ တိုက်တွန်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းများနှင့် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများကိုပါ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအဆင့်ကနေ innovation-driven လုပ်ငန်းများ အဆင့်ကို တိုးမြှင့်လာခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူ၊ ဂျိုဟောနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဘာတန် ကျွန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ စင်္ကာပူက ဦးဆောင် စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ အခု ပရိုဂရမ်ကြောင့် စင်္ကာပူဟာ လုပ်ခနည်း အလုပ်သမားတွေကို အသုံးချခွင့် ရပြီး သူ့ရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။
၁၉၉၆-၉၇ မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယမ် စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကို ယာယီသာ အဟန့်အတား ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဓိကအတား အဆီး ဖြစ်စေတဲ့ အချက်ကတော့ လုပ်ခ လစာတွေ မြင့်တက်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြသာနာကို ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့ အတွက် စင်္ကာပူ အစိုးရဟာ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျော့ချဖို့ ကြိုးစားခြင်း၊ ကုန်ထုတ်မှု စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းများဖြင့် လုပ်ခ လစာတွေ မြင့်တက်လာခြင်းကို ထိန်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါ တယ်။ စင်္ကာပူ ငွေကြေးမာလာခြင်းဟာလဲ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံက ထွက်ခွာလာဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အစိုးရဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ dot.com ရဲ့ ပြိုလဲခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ စက်တင်ဘာ ၁၁ အရေးအခင်းတို့က စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ပိုမိုဂယက် ရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ စင်္ကာပူ အစိုးရက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ အချက်အချာကျသော နိုင်ငံ (Global City) အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းမယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
၅) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် စင်္ကာပူ နိုင်ငံရေး
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ အဓိက အကြောင်းဟာ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံက ခွဲထွက်လာချိန်ကစလို့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံရေးကို PAP (People’s Action Party)က ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ PAP အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်မှုဟာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေထက် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုကို ဦးစားပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရချိန်ကစလို့ ၄ နှစ် တကြိမ် (သို့) ၅ နှစ်တကြိမ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းမှာ PAP (People’s Action Party) ပါတီဟာ အမတ်နေရာ အများစုနဲ့ အမြဲ အနိုင်ရခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီလို အနိုင်ရမှုတွေကြောင့်လဲ PAP ပါတီဟာ နိုင်ငံရေး ပေါ်လစီတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါမို့လဲ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို PAP ပါတီဟာ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ် ၂ ခု အတွင်းမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံ တကာက အသိအမှတ်ပြုရလောက်အောင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲပါ့တယ်။ အခြေခံ လိုအပ်ချက် တွေ ဖြစ်တဲ့ အိမ်ယာ၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူအများစု ကျေနပ်အောင် PAP အစိုးရ ဟာ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ရေတို ရေရှည် စီမံကိန်းတွေကို ချမှတ် ရာမှာ PAP အစိုးရဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့မှုတွေဟာ PAP ပါတီဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု တွေကို ရရှိစေခြင်း အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်အားကောင်းတဲ့ အတိုက်အခံ ပါတီ မရှိခြင်း ဟာလဲ PAP ပါတီ အောင်မြင်ရတဲ့ တကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၆) နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်များနဲ့ PAP
PAP ပါတီဟာ နိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်များကို သေချာချမှတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၀ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ လူထုပါတီလို့ အမည်ရတဲ့ The People’s Association (PA) အသင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသင်းဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ လူမျိုးရေး ညီညွှတ်မှုနဲ့ ရပ်ကွက်ဒေသတွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လို့ အမည်ခံခဲ့ပေမဲ့ ဒီအသင်းဟာ PAP အစိုးရရဲ့ ကျောထောက် နောက်ခံ အသင်းတခုဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေပါတယ်။
၁၉၈၁ ရွေးကောက်ပွဲ မှာတော့ PAP ပါတီဟာ ပထမဆုံး အမတ်နေရာ ၁ နေရာကို အလုပ်သမားပါတီက J.B. Jeyaretnam ဆီမှာ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၈၄ မှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အလုပ်သမားပါတီ က အမတ် တနေရာနဲ့ စင်္ကာပူ ဒီမိုကရေစီပါတီက အမတ် တနေရာကို အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် ၁၉၉၆ မှာတော့ အမတ် ၄ နေရာ အထိ လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲဟာတော့ PAP ပါတီရဲ့ သမိုင်း ကြောင်းအတွက် အမည်းစက်တွင် စေတဲ့ နှစ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် မဲအနဲငယ်နဲ့သာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
အမတ်နေရာ ၆ နေရာကို အတိုက်အခံ ပါတီတွေဆီကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ ရလဒ်ဟာ PAP ပါတီရဲ့ အခြေအနေကို မီးမောင်းထိုးပြသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ PAP ပါတီဟာ ဟိုးတချိန်ကလို လူကြိုက်မများလာတော့ဘူးဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲ။ ဒီအချက်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အကြောင်းအချက်များစွာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အချက်ကတော့ PAP ပါတီဟာသူရဲ့အောင်မြင် တိုးတက်မှုကို သူကိုယ်တိုင် မနိုင်တော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများစွာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ PAP အစိုးရအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေက ပိုလို့ ပိုလို့ မျှော်လင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ မျှော်လင့်ချက်တွေကို PAP အစိုးရအနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ခက်ခဲ လာပါတယ်။ ဒုတိယ အချက်ကတော့ ခေတ်ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားလူငယ်တွေ ပိုမို များပြားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်တွေဟာ ခေတ်ပညာတတ်တွေ ဖြစ်တာနဲ့အညီ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ သဘော တရားများကို ပိုလို့ တောင်းဆို သိမြင်လာကြပါတယ်။ တတိယအချက်ကတော့ PAP အစိုးရရဲ့ အမှား မကင်းသော ပေါ်လစီ အချို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသား အများအပြား နိုင်ငံ တွင်း ၀င်ရောက်လာခြင်းကို ပြည်သူအများစုက မကျေမနပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
PAP ပါတီဟာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံရေးကို ဆက်လက် လွှမ်းမိုးထားနိုင်ဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေ အစိုးရအပေါ် ကျေနပ် လာစေဖို့ နည်းအမျိုးမျိုး၊ ပေါ်လစီ အမျိုးမျိုးကို ချမှတ် ကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အသံကို နားထောင်နိုင်ဖို့ Public Feedback Unit ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ ဟာ စစ်ရေး အရ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာတခု ဖြစ်နေခြင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချက် မဖြစ်ပါဘူး။ စစ်ရေးအရ အချက်အချာကျခြင်းဟာ နိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ်တွေကို ဖိတ်ခေါ်စေတဲ့အတွက် အကောင်းထက် အဆိုးကို ဖြစ်စေပါတယ်။ တဖက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ စီးပွားရေး အရ အချက်အချာကျတဲ့နေရာ တခုဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ နိုင်ငံရေး ကာကွယ်မှု ရှိရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စစ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး မတူညီတာကို သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
Posted on January 4, 2017 Updated on January 6, 2017
ကမြ စာသငျတဲ့အခါတိုငျး ကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ သို့ seminar လာတကျသူတှကေ power point တောငျးလရှေိ့ကွပါတယျ..မြားသောအားဖွငျ့ ပေးလမေ့ရှိပါဘူး။
၁) ကမြရဲ့ ပွငျဆငျထားတဲ့ power point က မပွညျ့စုံလို့ပါ။.. ကမြက စာသငျတဲ့ နရောမှာ power point မှာ ပွငျထားသမထြကျ အမြားကွီး ပိုပွောလရှေိ့ပါတယျ။ အဲလို သငျခွငျးအားဖွငျ့ နားထောငျသူတှအေ နနေဲ့ ပိုပွီး စိတျဝငျစားမှတျမိစတေယျလို့ ယူဆလို့ ဖွဈပါတယျ။
၂) တခုကတော့ ကမြကိုယျတိုငျ အခြိနျ ပေးပွငျဆငျထားတဲ့ အရာတခုကို တနျဖိုးထားစခေငျြလို့ပါ။အငျတာနကျမှာ အလှယျတကူ ရတဲ့ power point တှကေို လှယျလှယျယူသုံးပွီး ကိုယျ ပွငျဆငျထားတဲ့ အရာတခုလို လူတှကေို လိမျကွတာလဲ မကွိုကျလို့ပါ။
သို့ သျော သှားလာရခကျခဲတဲ့.. လောလောဆယျ ကမြ မသှားနိုငျသေးတဲ့ မွို့ကလူတှေ အနနေဲ့ လေ့လာခငျြရငျ လလေ့ာနိုငျဖို့19ရကျ ၁၂ လ နဲ့ ၃၁ ရကျ ၁၂ လ ၂၀၁၆ က MTU နဲ့ YTU မှာ ပွောဖွဈခဲ့တဲ့ power point ကို တငျပေးလိုကျပါတယျ…
MTU မှာတော့ audience က မာစတာ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှဖွေဈလို့ သူတို့ကို research နဲ့ ပတျသတျလို့ မိတျဆကျ ပွောကွားပွီးမှ Image Processing ကို ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
YTU မှာတော့ ၃ နာရီ ကွာ ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပွီး အပိုငျး (၃) ပိုငျး ခှဲပွီး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။Image Processing MATLAB နဲ့ Active CCTV မိတျဆကျသာ ဖွဈတဲ့အတှကျ တပိုငျးခငျြးမှာ အကွောငျးအရာ အနညျးငယျစီကိုသာ ထိတှနေို့ငျခဲ့ပါတယျ။ စိတျပါဝငျစားသူမြား အောကျပါလငျ့မှာ download ရယူနိုငျပါတယျ။
ကျမ စာသင်တဲ့အခါတိုင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ သို့ seminar လာတက်သူတွေက power point တောင်းလေ့ရှိကြပါတယ်..များသောအားဖြင့် ပေးလေ့မရှိပါဘူး။
၁) ကျမရဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ power point က မပြည့်စုံလို့ပါ။.. ကျမက စာသင်တဲ့ နေရာမှာ power point မှာ ပြင်ထားသမျထက် အများကြီး ပိုပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲလို သင်ခြင်းအားဖြင့် နားထောင်သူတွေအ နေနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှတ်မိစေတယ်လို့ ယူဆလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂) တခုကတော့ ကျမကိုယ်တိုင် အချိန် ပေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတခုကို တန်ဖိုးထားစေချင်လို့ပါ။အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူ ရတဲ့ power point တွေကို လွယ်လွယ်ယူသုံးပြီး ကိုယ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတခုလို လူတွေကို လိမ်ကြတာလဲ မကြိုက်လို့ပါ။
သို့ သော် သွားလာရခက်ခဲတဲ့.. လောလောဆယ် ကျမ မသွားနိုင်သေးတဲ့ မြို့ကလူတွေ အနေနဲ့ လေ့လာချင်ရင် လေ့လာနိုင်ဖို့19ရက် ၁၂ လ နဲ့ ၃၁ ရက် ၁၂ လ ၂၀၁၆ က MTU နဲ့ YTU မှာ ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ power point ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
MTU မှာတော့ audience က မာစတာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်လို့ သူတို့ကို research နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မိတ်ဆက် ပြောကြားပြီးမှ Image Processing ကို ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
YTU မှာတော့ ၃ နာရီ ကြာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၃) ပိုင်း ခွဲပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Image Processing MATLAB နဲ့ Active CCTV မိတ်ဆက်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တပိုင်းချင်းမှာ အကြောင်းအရာ အနည်းငယ်စီကိုသာ ထိတွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အောက်ပါလင့်မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Vision & Image Processing.
English လို ပွောကွရာတှငျ..
ကြှနျမတို့တှေ စင်ျကာပူကို လာတော့မယျဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာအတှကျ၊ စကားပွောအတှကျ အမြားကွီး ပွငျဆငျ လာကွပါတယျ။ဒီမှာ အနကွောသှားတဲ့အခါ အင်ျဂလိပျလို ပွောနိုငျလာ လိမျ့မယျလို့လဲ ကိုယျ့ကိုယျကို မြှျောလငျ့ထားတတျကွပါတယျ။ တကယျလဲ ရောကျခါစမှာ မဖွဈမနေ သှားရတဲ့ အလုပျ အငျတာဗြူးတှမှော မလှဲမရှောငျသာ အင်ျဂလိပျစကား ပွောရပါတယျ။ သူတို့ ပွောသမြှကို အပွညျ့အဝ နားမလညျသလို ကိုယျပွောတာကိုလဲ သူတို့က အပွညျ့ နားမလညျပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အကောငျးဆုံး ပွငျဆငျလာခဲ့တဲ့အတှကျ အလုပျနဲ့ ပတျသတျလို့ ပွောသငျ့သလောကျ ပွောပွ နိုငျပါတယျ။ အဲလိုနဲ့ အလုပျရသှား ကွပါတယျ။အလုပျဝငျခါစမှာ သူတို့တှနေဲ့ ပွောရငျးဆိုရငျး ကိုယျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစာ တိုးတကျလာမယျလို့ မြှျောလငျ့မိပွနျပါတယျ။ သူတို့တှကေိုလဲ ဝငျပေါငျးဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ သှားကွ လာကွတဲ့အခါ သူတို့က အင်ျဂလိပျစကားနဲ့ မလေး (သို့) တရုတျပေါငျးထားတဲ့ စကားလုံးတှကေို သုံးစှဲလာတဲ့အခါ ကြှနျမတို့ အပွညျ့အဝ နားမလညျနိုငျတော့ပါဘူး သူတို့ပွောတာတှေ နားမလညျတဲ့အခါ၊ ကိုယျပွောလိုကျတိုငျး သူတို့က နားမလညျလို့ အကွိမျကွိမျပွော ရတဲ့အခါ စိတျထဲမှာ မိမိကိုယျကို အားငယျတဲ့ စိတျတှေ ဝငျလာပါတယျ။ နောကျ စရိုကျ၊ အလအေ့ကငျြ့တှကေ မတူညီတဲ့ အခါ အင်ျဂလိပျစကား ပွောဖို့ ကွောကျလာမိတယျ။ သူတို့နဲ့ သှားရတာကိုလဲ မပြျောတော့ဘူး။ အဲဒီအခါ သူတို့နဲ့ မပေါငျးလဲ ငါ့ဟာငါ ထမငျးသှားစားလို့ရတာပဲလို့ တှေးပွီး (တခြို့သော မွနျမာတှကေတော့ ပိုကျဆံ ခြှတောတဲ့အနနေဲ့ ထမငျးခြိုငျ့ ယူတဲ့အတှကျ) ၊ အလုပျမှာ အလုပျနဲ့ ပတျသတျတာပဲ ပွောပွီး ကငျးကငျးပဲ နလေိုကျတတျကွပါတယျ။ အလုပျပွငျပမှာရောဆိုတော့ စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ တနလေုံ့း အင်ျဂလိပျစကား မပွောပဲ နလေို့ရပါတယျ။ အမူအရာကို အသုံးပွုလို့ပေါ့။ ကနျတငျးလို နရောမှာ ထမငျးစားတဲ့အခါ လကျညှိုးထိုး ဝယျလို့ရနတေယျ။ ကုနျတိုကျကွီးတှေ စြေးဝယျတဲ့အခါ စကားတခှနျးမှ ပွောစရာမလိုပါ ဘူး။ ကိုယျ လိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို ခွငျးထဲကောကျထညျ့၊ ကောငျတာ ရောကျတော့ စာရေးမက ကှနျပြူတာထဲ စာရငျးရိုကျထညျ့၊ ကုနျကတြဲ့ ငှပေမာဏ (စကရငျမှာ ပျေါနတေဲ့ အတိုငျး)ကို ပေးလိုကျရငျ စြေးဝယျခွငျး အမှု ပွီးသှားတာမြိုးပါ။ အိမျမှာရော.. ကြှနျမတို့တှကေ မွနျမာ အခငျြးခငျြး စုငှားပွီးနကွေတာမြားပါတယျ။ ကိုယျ့အခငျြးခငျြး အင်ျဂလိပျလို ပွောဖို့ဆိုတာကလဲ တျောတျောလေးကို အူကွောငျကွောငျ နိုငျတဲ့ အဖွဈပါ။အဲဒီတော့ ကြှနျမတို့ ဘာဖွဈလာသလဲ။
စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ နခေဲ့ပွီးပမေဲ့လဲ အင်ျဂလိပျစာက တိုးတကျလာခွငျး မရှိပါဘူး။ကြှနျမတို့ ဘာလုပျကွမလဲ။အခုလို နရေငျလဲ အဆငျပွနေတောပဲဆိုတော့ အင်ျဂလိပျစာ ဆကျ လလေ့ာဖို့ မလိုတော့ဘူးလား။
တကယျတော့ အခုလို နလေို့ရနတေယျ၊ အဆငျပွေ နတေယျဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ ရာထူးက ငယျနတေုနျးသာပါ။ ကိုယျက ရာထူး မွငျ့လာတဲ့အခါ ယူရတဲ့ တာဝနျတှလေဲ မြားလာပါတယျ။ အစညျးအဝေးတှမှော စကားပွောတဲ့အခါ အကြိုးအပဲ့ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ ပွောလို့ အဆငျမပွနေိုငျတော့ပါဘူး။ သူမြားပွောတာ နားလညျရုံ၊ ခိုငျးတာ လုပျတတျရုံနဲ့ မဖွဈတော့ပါဘူး။ ဒီအတှကျ ကြှနျမတို့ ကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတတျအောငျ ကွိုးစားနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
အင်ျဂလိပျစာနဲ့ ပတျသတျတဲ့ သငျတနျးတှေ တကျပါလို့ ပွောလိုကျရငျ မွနျမာ အမြားစုက တှနျ့သှားတတျ ကွပါတယျ။ ဒါကလဲ အကွောငျး (၂) ခကျြ ရှိပါတယျ။ ပထမ အခကျြက မွနျမာအမြားစုက အိမျကို ငှပေို့ကွတာ မြားပါတယျ။အဲဒီအတှကျ ငှေ အပို မဖွုနျးခငျြတာပါ။ ဒုတိယအခကျြက အင်ျဂလိပျစာ စကားပွော ကို သငျတနျးတကျရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတဲ့ မွနျမာပွညျက ပါလာတဲ့ အစှဲပါ။
ပထမအခကျြအတှကျကတော့ ကြှနျမတို့ ရရှေညျဆကျသှားနိုငျဖို့ ကွညျ့ကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အမြားကွီး မလိုပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ လခငှထေဲက တလကို တဈရာ၊ နှဈရာလောကျကို ဖဲ့ထုတျမယျဆိုရငျ အသငျ့အတငျ့ သငျတနျးတှေ တတျလို့ရနိုငျပါတယျ။
ဒုတိယ အခကျြကတော့ မှားနတေဲ့ အစှဲကို စှနျ့လိုကျပါလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။ သငျတနျးတကျတဲ့ အတှကျ နခေ့ငျြးညခငျြး ဝုနျးခနဲ အင်ျဂလိပျစာ မတိုးတကျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အဲလို သငျတနျးတှေ တတျနတေဲ့အတှကျ ကြှနျမတို့က အင်ျဂလိပျစာကို ထိတှနေ့ပေါတယျ။ သငျတနျးမှာ ပေါငျးရငျးသငျးရငျးက အဆငျပွရေငျ အင်ျဂလိပျလိုပဲ ပွောဆိုရမဲ့ သူငယျခငျြး (ဒီနရောမှာ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ သူငယျခငျြးကှာပါတယျ) တှေ ရနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို ပေါငျးရငျး သငျးရငျးကနေ သူတို့ရဲ့ စရိုကျ၊ နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးရတဲ့ အနအေထားကို နားလညျလာနိုငျပါတယျ။ အဲဒီကတဆငျ့ အဆငျပွမေဲ့ သူမြိုးကို အလုပျမှာ ရှေးခယျြ ပေါငျးသငျးလာနိုငျပါတယျ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ သူငယျခငျြး ကှာပါတယျ။ အလုပျ အကွောငျးအပွငျ ပွငျပ အကွောငျးအရာတှကေို ပွောလို့ရတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ရှိလာပွီဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာ ပွောဖို့ မကွောကျတော့ ပါဘူး။ ဒါဟာ ကြှနျမတို့အတှကျ ပထမဆုံး အဆငျ့ပါ။နောကျတခကျြက အင်ျဂလိပျ ဂရမျမာနဲ့ ပတျသတျလို့ ပုံမှနျ လလေ့ာဖွဈတာပါ။ အရေးမှနျမှ၊ ဝေါဟာရ ကွှယျဝမှသာ စကားပွောလို့လဲ တိုးတကျတာပါ။ မေး၊ ချေါ၊ ထူး ၊ ပွော အဆငျ့အတှကျ ဂရမျမာ မှနျဖို့ မလို ဘူး ဆိုပမေဲ့ အဆငျ့တခုနဲ့ စကား ပွောတတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဂရမျမာ မှနျဖို့၊ စကားလုံး ကွှယျဝဖို့ လိုအပျတယျလို့ ရိုးသားစှာ မွငျမိပါတယျ။
နိုငျငံခွားသားကို မွနျမာ အခငျြးခငျြး ပေါငျးသလို ပေါငျးပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပေါငျးပါ။ ဒါကို ဘာလို့ ပွောရသလဲဆိုတော့ ကြှနျမတို့ မွနျမာ အခြို့က နိုငျငံခွားသားနဲ့ ပေါငျးရငျ ပငျကိုယျ ပြောကျသှားတတျ ကွလို့ပါ။ တခြို့မွနျမာတှကေ သူတို့ကို ဖားပေါငျးတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ဟနျဆောငျပွီး ပေါငျးတတျကွ တယျ။တခြို့က သူတို့ကို အထငျသေးပွီး ပေါငျးကွတယျ။ဒါကို နိုငျငံခွားသားတှကေလဲ ခံစားသိနဲ့ သိပါ တယျ။ အဲလို ပေါငျးတဲ့အတှကျ ရငျဖတျခွငျး ရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ဖွဈမလာနိုငျပါဘူး။ အရှိကို အရှိအတိုငျးပဲ ပေါငျးပါ။ မွနျမာအခငျြးခငျြး ပေါငျးသလိုပဲ ပေါငျးပါ။ အဲဒါဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှေ ရလာနိုငျ ပါတယျ။ နိုငျငံခွားသူတှထေဲမှာလဲ ကိုယျနဲ့ စရိုကျ ကိုကျညီပွီး ပေါငျးလို့ ရသူ ရှိသလို စရိုကျ မညီတဲ့ လူတှလေဲ ရှိပါတယျ။
အင်ျဂလိပျ သတငျးစာ ဖတျပါ။အင်ျဂလိပျလို သတငျးစာ ဖတျခွငျးအားဖွငျ့ အင်ျဂလိပျစာ စကားလုံး ကွှယျဝရုံ မက သူငယျခငျြးတှကွေားမှာလဲ ပွောစရာ စကားရှိပါတယျ။ ၀ါသနာပါမယျဆိုရငျတော့ ရုပျရှငျကား ကွညျ့တာ၊ သီခငျြးနားထောငျတာ၊ ဝတ်ထုဖတျတာ မြိုးကို အင်ျဂလိပျလို ကွညျ့၊ ဖတျ၊ နားထောငျဖို့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ နောကျတခုက စိတျဝငျစားတယျ ဆိုရငျ အင်ျဂလိပျ ဘလော့ဂျတှကေို ဖတျပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘာသာစကားကို လလေ့ာတဲ့နရောမှာ ၀ါသနာပါတာနဲ့ လလေ့ာတာက ပိုအကြိုးရှိတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့တာ အင်ျဂလိပျစာ တိုးတကျတာ မှနျပမေဲ့ ရုပျရှငျကွညျ့တာမှ ၀ါသနာ မပါရငျတော့ အလကားပါပဲ။
ကြှနျမတို့ မွနျမာလူငယျတှေ စင်ျကာပူလုပျငနျးခှငျမှာ အပေါငျးအသငျး ဝငျဆံ့သော၊ ပွောရဲ ဆိုရဲ၊ ပွောနိုငျ ဆိုနိုငျသော မွနျမာလူငယျမြား အဖွဈ ရပျတညျနိုငျပါစေ။
ကျွန်မတို့တွေ စင်္ကာပူကို လာတော့မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာအတွက်၊ စကားပြောအတွက် အများကြီး ပြင်ဆင် လာကြပါတယ်။ဒီမှာ အနေကြာသွားတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လို ပြောနိုင်လာ လိမ့်မယ်လို့လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မျှော်လင့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လဲ ရောက်ခါစမှာ မဖြစ်မနေ သွားရတဲ့ အလုပ် အင်တာဗျူးတွေမှာ မလွှဲမရှောင်သာ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောရပါတယ်။ သူတို့ ပြောသမျှကို အပြည့်အ၀ နားမလည်သလို ကိုယ်ပြောတာကိုလဲ သူတို့က အပြည့် နားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့အတွက် အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြောသင့်သလောက် ပြောပြ နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ အလုပ်ရသွား ကြပါတယ်။အလုပ်ဝင်ခါစမှာ သူတို့တွေနဲ့ ပြောရင်းဆိုရင်း ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပြန်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုလဲ ၀င်ပေါင်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သွားကြ လာကြတဲ့အခါ သူတို့က အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ မလေး (သို့) တရုတ်ပေါင်းထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးစွဲလာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ အပြည့်အ၀ နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး သူတို့ပြောတာတွေ နားမလည်တဲ့အခါ၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တိုင်း သူတို့က နားမလည်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြော ရတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို အားငယ်တဲ့ စိတ်တွေ ၀င်လာပါတယ်။ နောက် စရိုက်၊ အလေ့အကျင့်တွေက မတူညီတဲ့ အခါ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဖို့ ကြောက်လာမိတယ်။ သူတို့နဲ့ သွားရတာကိုလဲ မပျော်တော့ဘူး။ အဲဒီအခါ သူတို့နဲ့ မပေါင်းလဲ ငါ့ဟာငါ ထမင်းသွားစားလို့ရတာပဲလို့ တွေးပြီး (တချို့သော မြန်မာတွေကတော့ ပိုက်ဆံ ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ ထမင်းချိုင့် ယူတဲ့အတွက်) ၊ အလုပ်မှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာပဲ ပြောပြီး ကင်းကင်းပဲ နေလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်ပြင်ပမှာရောဆိုတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ တနေ့လုံး အင်္ဂလိပ်စကား မပြောပဲ နေလို့ရပါတယ်။ အမူအရာကို အသုံးပြုလို့ပေါ့။ ကန်တင်းလို နေရာမှာ ထမင်းစားတဲ့အခါ လက်ညှိုးထိုး ၀ယ်လို့ရနေတယ်။ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ ဈေးဝယ်တဲ့အခါ စကားတခွန်းမှ ပြောစရာမလိုပါ ဘူး။ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ခြင်းထဲကောက်ထည့်၊ ကောင်တာ ရောက်တော့ စာရေးမက ကွန်ပျူတာထဲ စာရင်းရိုက်ထည့်၊ ကုန်ကျတဲ့ ငွေပမာဏ (စကရင်မှာ ပေါ်နေတဲ့ အတိုင်း)ကို ပေးလိုက်ရင် ဈေးဝယ်ခြင်း အမှု ပြီးသွားတာမျိုးပါ။ အိမ်မှာရော.. ကျွန်မတို့တွေက မြန်မာ အချင်းချင်း စုငှားပြီးနေကြတာများပါတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ဆိုတာကလဲ တော်တော်လေးကို အူကြောင်ကြောင် နိုင်တဲ့ အဖြစ်ပါ။အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ ဘာဖြစ်လာသလဲ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့ပြီးပေမဲ့လဲ အင်္ဂလိပ်စာက တိုးတက်လာခြင်း မရှိပါဘူး။ကျွန်မတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။အခုလို နေရင်လဲ အဆင်ပြေနေတာပဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆက် လေ့လာဖို့ မလိုတော့ဘူးလား။
တကယ်တော့ အခုလို နေလို့ရနေတယ်၊ အဆင်ပြေ နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးက ငယ်နေတုန်းသာပါ။ ကိုယ်က ရာထူး မြင့်လာတဲ့အခါ ယူရတဲ့ တာဝန်တွေလဲ များလာပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ စကားပြောတဲ့အခါ အကျိုးအပဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပြောလို့ အဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး။ သူများပြောတာ နားလည်ရုံ၊ ခိုင်းတာ လုပ်တတ်ရုံနဲ့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီအတွက် ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတတ်အောင် ကြိုးစားနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်ပါလို့ ပြောလိုက်ရင် မြန်မာ အများစုက တွန့်သွားတတ် ကြပါတယ်။ ဒါကလဲ အကြောင်း (၂) ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမ အချက်က မြန်မာအများစုက အိမ်ကို ငွေပို့ကြတာ များပါတယ်။အဲဒီအတွက် ငွေ အပို မဖြုန်းချင်တာပါ။ ဒုတိယအချက်က အင်္ဂလိပ်စာ စကားပြော ကို သင်တန်းတက်ရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်က ပါလာတဲ့ အစွဲပါ။
ပထမအချက်အတွက်ကတော့ ကျွန်မတို့ ရေရှည်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီး မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လခငွေထဲက တလကို တစ်ရာ၊ နှစ်ရာလောက်ကို ဖဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် အသင့်အတင့် သင်တန်းတွေ တတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်ကတော့ မှားနေတဲ့ အစွဲကို စွန့်လိုက်ပါလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ သင်တန်းတက်တဲ့ အတွက် နေ့ချင်းညချင်း ၀ုန်းခနဲ အင်္ဂလိပ်စာ မတိုးတက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲလို သင်တန်းတွေ တတ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့က အင်္ဂလိပ်စာကို ထိတွေ့နေပါတယ်။ သင်တန်းမှာ ပေါင်းရင်းသင်းရင်းက အဆင်ပြေရင် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောဆိုရမဲ့ သူငယ်ချင်း (ဒီနေရာမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ သူငယ်ချင်းကွာပါတယ်) တွေ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေါင်းရင်း သင်းရင်းကနေ သူတို့ရဲ့ စရိုက်၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းရတဲ့ အနေအထားကို နားလည်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် အဆင်ပြေမဲ့ သူမျိုးကို အလုပ်မှာ ရွေးချယ် ပေါင်းသင်းလာနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ သူငယ်ချင်း ကွာပါတယ်။ အလုပ် အကြောင်းအပြင် ပြင်ပ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိလာပြီဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ ပြောဖို့ မကြောက်တော့ ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့အတွက် ပထမဆုံး အဆင့်ပါ။နောက်တချက်က အင်္ဂလိပ် ဂရမ်မာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပုံမှန် လေ့လာဖြစ်တာပါ။ အရေးမှန်မှ၊ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝမှသာ စကားပြောလို့လဲ တိုးတက်တာပါ။ မေး၊ ခေါ်၊ ထူး ၊ ပြော အဆင့်အတွက် ဂရမ်မာ မှန်ဖို့ မလို ဘူး ဆိုပေမဲ့ အဆင့်တခုနဲ့ စကား ပြောတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂရမ်မာ မှန်ဖို့၊ စကားလုံး ကြွယ်ဝဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ရိုးသားစွာ မြင်မိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားကို မြန်မာ အချင်းချင်း ပေါင်းသလို ပေါင်းပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပေါင်းပါ။ ဒါကို ဘာလို့ ပြောရသလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာ အချို့က နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ပေါင်းရင် ပင်ကိုယ် ပျောက်သွားတတ် ကြလို့ပါ။ တချို့မြန်မာတွေက သူတို့ကို ဖားပေါင်းတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟန်ဆောင်ပြီး ပေါင်းတတ်ကြ တယ်။တချို့က သူတို့ကို အထင်သေးပြီး ပေါင်းကြတယ်။ဒါကို နိုင်ငံခြားသားတွေကလဲ ခံစားသိနဲ့ သိပါ တယ်။ အဲလို ပေါင်းတဲ့အတွက် ရင်ဖတ်ခြင်း ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အရှိကို အရှိအတိုင်းပဲ ပေါင်းပါ။ မြန်မာအချင်းချင်း ပေါင်းသလိုပဲ ပေါင်းပါ။ အဲဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ ရလာနိုင် ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသူတွေထဲမှာလဲ ကိုယ်နဲ့ စရိုက် ကိုက်ညီပြီး ပေါင်းလို့ ရသူ ရှိသလို စရိုက် မညီတဲ့ လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် သတင်းစာ ဖတ်ပါ။အင်္ဂလိပ်လို သတင်းစာ ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ စကားလုံး ကြွယ်ဝရုံ မက သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလဲ ပြောစရာ စကားရှိပါတယ်။ ၀ါသနာပါမယ်ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကား ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ ၀တ္ထုဖတ်တာ မျိုးကို အင်္ဂလိပ်လို ကြည့်၊ ဖတ်၊ နားထောင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ နောက်တခုက စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အင်္ဂလိပ် ဘလော့ဂ်တွေကို ဖတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာစကားကို လေ့လာတဲ့နေရာမှာ ၀ါသနာပါတာနဲ့ လေ့လာတာက ပိုအကျိုးရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်တာ မှန်ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမှ ၀ါသနာ မပါရင်တော့ အလကားပါပဲ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူငယ်တွေ စင်္ကာပူလုပ်ငန်းခွင်မှာ အပေါင်းအသင်း ၀င်ဆံ့သော၊ ပြောရဲ ဆိုရဲ၊ ပြောနိုင် ဆိုနိုင်သော မြန်မာလူငယ်များ အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါစေ။
This entry was posted in Learning English.
Vision & Image Processing (5)